NEWS COLLECTION: February 2013
ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSA) တောင်ပိုင်းတပ်များ တပ်စွဲထားသည့် တောင်ကုန်း ၂ ခုကို အရှေ့အလယ်ပိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် တြိဂံတိုင်း စစ်ဌာ နချုပ် လက်အောက်ခံ အစိုးရတပ်များက ယနေ့နောက်ဆုံး ထား၍ ရွှေ့ခိုင်းထားပြီး SSA တောင်ပိုင်းကလည်း ဖယ်မပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် နှစ် ဘက် အခြေအနေ တင်းမာလျက်ရှိ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် ဟိုမိန်းမြို့နယ်ရှိ လွိုင်လျန်းတောင်ကုန်းနှင့် မိုင်းထားမြို့နယ်ရှိ လွိုင်မို့နန်းလျန်း တောင်ကုန်းများပေါ်တွင် တပ်စွဲထားသော SSA တောင်ပိုင်း ရှေ့တန်းတပ်များကို ယင်းဒေသရှိ အစိုးရတပ်ဗျူဟာ များက ယနေ့ နောက်ဆုံးထား ရွှေ့ပြောင်းပေးရန် အကြောင်းကြားထားမှုကို ၎င်းတို့ဘက်က ငြင်းဆန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း SSA တောင်ပိုင်းဘက်က ပြောသည်။
SSA တောင်ပိုင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောင်ဆိုင်းက “သူတို့လိုချင်တာက ပြန့်ကြဲနေတဲ့ ကျနော်တို့ တပ်တွေကို စုပြုံနေတာကို လို ချင်တာ။ ကျနော်တို့ဘက်ကကျတော့ တနေရာ ဖယ်ပေးရင် နောက်ထပ် တနေရာ ဖယ်ပေးဖို့ ထပ်လာဦးမှာပဲ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယင်းသို့ တင်းမာမှုကြောင့် နှစ်ဖက် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်မည့် အခြေအနေများ မရှိကြောင်း၊ SSA တောင်ပိုင်း အနေဖြင့်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းသိမ်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောင်ဆိုင်းက ပြော သည်။
“တချို့က နယ်မြေအတွင်း အကြောင်းမကြားဘဲ ဝင်လာတော့ အောက်ခြေတပ်အချင်းချင်း တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ တချို့ အကြောင်းကြားပြီး ဝင် လာတဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေဆိုရင်လည်း အရှေ့ဘက်သွားမယ်လို့ အကြောင်း ကြားထားပေမယ့် တောင်ဘက်သွားရင် သွားတယ်၊ မြောက်ဘက်သွား ရင် သွားတယ်။ အကဲစမ်းသလိုမျိုး လုပ်တယ်” ဟု ၎င်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
တောင်ပိုင်း လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့များ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အစိုးရတပ်မှ အရာရှိ ၂ ဦးနှင့် တပ်သား ၃ ဦးကျဆုံးပြီး SSA ဘက်မှ ဒဏ်ရာရရှိ မှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောင်ဆိုင်းက ပြောသည်။
ယင်းတိုက်ပွဲသည်လည်း အစိုးရဘက်မှ ကြိုတင် အကြောင်းကြားခြင်း မရှိဘဲ ၎င်းတို့ ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း ဝင်ရောက် လာရာမှ ပစ်ခတ်မှု များ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ် ကြောင်း၊ ယင်းတိုက်ပွဲတွင် SSA ဘက်က ရိုင်ဖယ် ၆ လက်နှင့် ပစ္စတို ၂ လက် ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ အဆို ပါလက်နက်များ ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတပ်သို့ ပြန်အပ်နိုင်ရန် ဆက်သွယ်ထားကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါတိုက်ပွဲသည် ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့က ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီ (RCSS) ဥက္ကဌ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ် ဦးဆောင် သော အဖွဲ့နှင့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ကော်မတီ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း တို့ နှစ်ဘက် အပစ်ခတ် မရှိတော့ ရန် ဆွေးနွေးပြီးနောက် ၅ ရက်အကြာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တချိန်တည်းမှာပင် အစိုးရနှင့် ပဏာမ အပစ်ရပ်စဲမှု သဘောတူညီပြီးဖြစ်သော ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း (SSA-N) နှင့် အစိုးရတပ် များ လည်း နှစ်ဖက်ထိစပ် နယ်မြေများတွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
RCSS/SSA နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာဘက်သို့ အစိုးရတပ် အင် အားထပ်ဖြည့်
ယခင်အပတ်က သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ခိုလမ်မြို့နယ်ခွဲအတွင်း သျှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကောင်စီ RCSS/SSA နှင့် မြန်မာ့တပ် မတော်တို့ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွါးပြီးနောက်ပိုင်း စစ်ရေးငြိမ်သက်မှုမရှိဘဲ ယမန့်က အစိုးရတပ် အင်အားထပ်ဖြည့် နေကြောင်း ဒေသခံ များက ပြောပါသည်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး ၃ ရက်အကြာ ယမန်နေ့က မူတပ်အပြောင်းအလဲဟုဆိုကာ နမ့်စန်မြို့နယ်မှ တက်လာသည့် စစ်ဖိုးဝီးကား အစီး ၄၀ ခန့်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာဘက်တို့ သွားနေသောကြောင့် ဒေသခံလူ ထုက စစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာလာမည်ကို စိုးရိမ်နေကြောင်း ရပ်ရွာ အ ကြီးအကဲများကပြောသည်။
“တချို့က စစ်သားအပြည့်တင်တယ်။ လက်နက်တွေတော့ကိုင်ထားတာမတွေ့ဘူး။ တချို့အစီးတွေမှာလဲ ဘာတွေအပြည့် တင်ထားလဲတော့ မသိဘူး မိုးကာကြီးတွေနဲ့ ဖုံးထားတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့က တိုက်ပွဲ ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုဘဲ သွားတာနဲ့တူတယ်” ဟု အဆိုပါဒေသ အ တွင်းခရီးသွား နေသည့် နိုင်ငံရေးပါတီဝင်တဦးကပြောသည်။
အခုလ ၂၄ ရက်က ခိုလမ်မြို့နယ်ခွဲအတွင်း ခလရ ၆၆ စစ်ကြောင်းတကြောင်းနှင့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော်၏ တပ်မဟာ ၃၇၆ လက်အောက်ခံ တပ်ခွဲတခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွါးရာ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ စစ်ကြောင်းမှူးအပါ အဝင် ၅ ဦးကျဆုံးခဲ့ကြောင်း သျှမ်းပြည် တပ်မတော်က ပြောပါသည်။
“တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ RCSS/SSA ဘက်က စစ်ပစ္စည်းများနဲ့အတူ လက်နက်မျိုးစုံ ၈ လက် သိမ်းဆည်းရတယ်။ ဗမာတပ် ဘက်ကလဲ ပြန်လိုချင် တယ်။ ဒါကို သူတို့က အဲဒီ လက်နက်တွေကို ကျေးလက်လူထု နဲ့ ရွာသူကြီးတွေဆီမှာဘဲ ထားပေးပါ။ သူတို့လာယူမယ်တဲ့။ ဒါကို RCSS/SSA က လက်မခံဘူး။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် တရားဝင်ပြန်အပ်ချင်တာလေ” - ဟု RCSS/SSA ခေါင်းဆောင်ပိုင်း နှင့် နီးစပ်သူ ပုဂ္ဂိလ်တဦးကပြော ပါသည်။
ထိုသို့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွါးပြီးသည့်နောက် ရလခ တိုင်းရုံးစိုက်ရာ ခိုလမ်မြို့နယ်ခွဲရှိ RCSS/SSA ၏ဆက်ဆံရေးရုံးထိုင် ဗိုလ်မှူး တေဝိန်အား မြန် မာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားသည်ဟု ဒေသခံများကြား ပြောသော်လည်း သျှမ်းပြည်တပ်မတော် ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က အတည်ပြုခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ဗိုလ်မှူးတေဝိန် နှင့်နီးစပ်သူတဦးက ရလခတိုင်းရုံးခေါ်ယူတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ မှန်ကြောင်း၊ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ တွေ့ဆုံမှုကြန့်ကြာသွားခြင်းသာဖြစ်သောကြောင့် ပြောပါသည်။
“တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေ့က တိုင်းရုံးကခေါ်သွားတာပါ။ မေးမြန်းဖို့သက်သက်ပါဘဲ။ ဖမ်းတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ချိန်မှာလဲ သူ့ကိုဆက်သွယ်လို့မရတော့ လူထုက စိတ်ပူပြီး တော့ အဖမ်းခံရတယ်ထင်ပြီး ဒီသတင်း ကြီးသွားတာ။ အခုတိုင်းရုံးက ပြန် လွှတ်ပေးပါပြီ။ မနေ့ညကတောင်ကျ နော်တို့ အတူတူထမင်းစားနေသေးတယ်” - ဟု အဆိုပါရုံးထိုင်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် နီး စပ်သူ ခိုလမ်ရပ်မိရပ်ဖတဦးကပြောပါသည်။
ယမန်နှစ် ဩဂတ်စ်လကလည်း နမ္မတူမြို့နယ် ဒေသခံတချို့အား သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP/SSA ၏ အမာခံ လူ ဟု စွပ်စွဲကာ မြန် မာ့တပ်မတော်က ၁၀ ဦးထက်မနဲ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ထိုနောက်ပိုင်း SSPP/SSA က ခမရ ၃၂၄ ၏တပ်ရင်း ဗိုလ်ကြီး သက်စိုးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ၎င်းဖြစ်ရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရန်ဟုဆိုကာ ရမခ တိုင်းရုံးက လားရှိုးမြို့ရှိ SSPP/SSA ၏ ဆက်ဆံရေးရုံးထိုင်ကိုယ်စားလှယ် ကို ၄၈ နာရီကြာ ခေါ်ယူထားခဲ့ဖူးသည်။
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ထိန်းချုပ်နယ်မြေ လိုင်ဇာမြို့သို့ နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ ICRC မှ ယမန်နေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဆေးဝါးပစ္စည်းများ လာရောက် ကူညီ ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ ICRC မှ လိုင်ဇာမြို့အနီးတ၀ိုက်ရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်း အတွက် ဆေးဝါးပစ္စည်း ကိရိယာ များများကို ICRC ကား ၃ စီးဖြင့် သယ်ဆောင်ကာ ကူညီပေးဝင် ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု KIO ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ် ရေးကော် မတီ ဥက္ကဌ ဆလန်ကဘား ဒွဲပီဆာ (Salang Kaba Doi Pyi Sa) ပြောသည်။
“မနေ့ကရောက်တယ်။ ဒီမနက်က လိုင်ဇာပြည်သူ့ဆေးရုံနဲ့ စစ်တပ်ဆေးရုံတွေမှာ လိုက်ကြည့်တယ်။ ဒီနေ့တော့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုသွား တယ်။ သူတို့အဓိကတော့ တိုက်ပွဲမှာ ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေ၊ စစ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ ဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာတွေကို လာ လည့်လာတာဟုတ်တယ်။ ဆက်ပြီး ဘာတွေလိုတယ်။ ဘာတွေကူညီရမယ်ဆိုတာတွေကို လာကြည့်တယ် ဆိုတာတွေပြောတယ်။”
လိုင်ဇာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ လာရောက် ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း လိုင်ဇာပြည်သူ့ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဦးတူးအောင် (Salang Tu Awng) က KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ပြောသည်။
“ကတ်ကြေးလိုမျိုးတွေ အများပိုင်းက ဆေးရုံမှာ ကိုင်တဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေဟုတ်တယ်။ ချိုင်းထောက်တွေပါတယ်။ လူနာတွေထိုင်ပြီးတွန်း တဲ့ဟာမျိုး ထိုင်ခုံတွေလည်း ပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာတော့ ဆေးတွေက မပါဘူး။ သူတို့က ဖြစ်နိုင်သလောက်လာကူညီထားတာပါ ဆိုပြီးပြော တယ်။”
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း မှယခုလို လက်ရှိခက်ခဲတွေ့ကြုံနေသည့် အခြေအနေကို လာရောက်ကူညီ ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့် နှောင်အတွက် အကူ အညီအခွင့်အလမ်းများပိုမိုအလားအလာကောင်းလာနိုင်သည်ဟု ဆလန်ကဘား ဒွဲပီဆာ (Salang Kaba Doi Pyi Sa) သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
“သူတို့ အခုလိုအစီအစဉ်နဲ့ လာရောက်တာကောင်းတယ်။ သူတို့ ရန်ကုန်တို့ နိုင်ငံတကာက သတင်းပဲနားထောင်နေရင် KIO ကလို သလိုလို အ စိုးရက ကောင်းသလိုလို အဲလိုမျိုးတွေ သူတို့အတွက် နားလည်ရ ခက်တယ်။ ဒီကိုရောက်လာပြီး ကျနော်တို့နဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောတယ်။ ဒုက္ခ သည်အခြေအနေတွေ ပြောပြတယ်။ နေရာတွေကိုလိုက်ပြတယ်။ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအ နေ တွေကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးတွေ က နေပြီး သိသင့် သိထိုက်တာတွေကို ပြောပြတယ်။ သူတို့ ဒီကိုလာတွေ့ဆုံ သွားတော့ ဒီကအကြောင်းလည်း ပိုသိသွားတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် လည်း ပြည်ပမှာ တ ကယ်ပဲ မှန်ကန်တဲ့ သက်သေအနေနဲ့ ပြောပြ နိုင်တဲ့ လူတွေဟုတ်တယ်။ အဲဒါက နောင်အတွက် ကောင်းတဲ့ အဖြေ ထွက် လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရတယ်။”
၄င်းအဖွဲ့ကို နိုင်ငံခြားသား Dominik Urban ဦးဆောင်ကာ နိုင်င်ငံခြားသား ၄ ဦး အပါအ၀င် အဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးဖြစ်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ကတည်းက ဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့သို့ ထွက်ခွာခဲ့သော်လည်း လဂျားယန် မရောက်မီ မုန်လိုင်ချောင်းတံတားတွင် လဂျားယန် အစိုးတပ်ဖွဲ့များမှ လုံခြုံရေးတာဝန် မယူပေးနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဗန်းမော်တို့ပြန်ဆုတ်သွားကာ လွယ်ဂျယ်-မိုင်ဂျာယန်ဘက်မှ KIO ဌာနချုပ်သို့ ပြန်ဝင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“သူတို့က ဗန်းမော်ဘက်ကနေပြီး ဒေါ့ဖုန်းယန်လမ်းကနေ လာခဲ့တာ။ မုန်လိုင်ခချောင်း ကူးမှ လိုင်ဇာအနီး လဂျားယန်ရောက်တာလေ။ အဲဒီမှာ ဖြတ်ကူးမယ့် တံတားမှာ ကားသွားလို့မရဘူး။ KIA တွေ မိုင်း ထောင်ထားတယ်။ လုံခြုံမှုမရှိဘူး။ ဆိုပြီး ပြန်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်တဲ့။ အဲဒီကနေ သူတို့ ဗန်းမော်ထိ ပြန်ဆုတ်သွားတယ်။ ဗန်းမော်ကနေ လွယ်ဂျေ ပြီးတော့ KIO နယ်မြေ မိုင်ဂျာယန်ရောက်တော့ ကျနော်တို့လာကြိုတယ်။” ဟု ဆလန်ကဘား ဒွဲပီဆာ ပြောသည်။
အဆိုပါ ရန်ကုန်အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ ICRC အဖွဲ့တို့သည် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် လိုင်ဇာဌာနချုပ်မှ ပြန်လည် ထွက် ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကလည်း ယခုလဆန်းပိုင်းက ကချင်ပြည်နယ်ကို နိုင်ငံတကာ UN အကူအညီတွေခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ သည့်နောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်သို့ ဒုက္ခသည်အတွက်အကူအညီ များ ဆက်တိုက်ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သော်လည်း သမ္မတ၏ပြောဆိုမှုအား လက်တွေ့ကျမကျကို အခြေအနေ စောင့်ကြည့်ရန်နေချိန်လည်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်ခရိုင် ကျိုင်းလတ်မြို့နယ်ခွဲက ရွာသား ၃၀ ကျော်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က တောထဲကို သစ်ခုတ်သွား ရင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တခုရဲ့ ခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပြီး မိသားစုထံ ပြန် မရောက်သေးဘူးလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ရွှေတြိဂံနယ်မြေအပေါ်ဘက် ကျိုင်းလတ်မြို့နယ်ခွဲ ၀မ့်လုံကျေးရွာက ရွာသားတွေဟာ တောထဲမှာ ညအိပ်ညနေ သစ်ခုတ်သွားရင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀ ၁၁ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ ကစပြီး ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သူတို့ရုံး ခန်းမှာ လာတိုင်ထားကြတယ်လို့ တာချီလိတ်ခရိုင် ကျိုင်းလတ်မြို့နယ် အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောပါတယ်။
“သူတို့က ရွာအနောက်ဘက် တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာ သစ်သွားဆွဲတော့ ၀ အဖွဲ့လို့ ယူဆရတဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းသွားတာ။ဖမ်းသွားတာကအယောက် ၅၀ ကျော်ပေမယ့် တချို့က ထွက်ပြေးလို့လွတ်သွားပြီး ပါသွားတာ ၃၈ ယောက်။ တချို့အိမ်တွေလည်း တအိမ်ထဲက လူ ၂-၃ ယောက်လောက် ပါသွားတာ။ သေသလား ရှင်သလား မသိဘူးပေါ့။”
၀မ့်လုံရွာသားတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးမိုင်အွန်ကလည်း “ပျောက်ဆုံးတဲ့အထဲမှာ သမက် ၂ ဦးနဲ့ တူတော်သူ ၁ ဦး ပါသွားတယ်။ တောထဲသွားပြီး ၅ ရက် လောက်အကြာ အဖမ်းခံရ တာ။ အိမ်ကို အဓိက ရှာကျွေးနေတဲ့ ယောက်ျား ၃ ဦးလုံး ပြန်မလာတော့ မြေး ၃ ယောက်နဲ့ အတူ တအိမ်သားလုံး ၀မ်းရေးခက်ခဲတယ်။ သူတို့ တိုင်ကြားထားတဲ့ လူကြီးတွေ မေးကြည့်တော့လည်း မသိသေး ဘူလို့ဘဲ ပြောကြတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
၀မ့်လုံရွာဟာ တာချီလိတ်မြို့ အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင် ၅၀ လောက်အကွာ အိမ်ခြေ ၂၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ ရွာကြီးတရွာဖြစ်ပြီးသူတို့ရွာသားတွေအဖမ်း ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း တောထဲမှာ ဘယ်သူမှ သစ်မခုတ်ရဲတော့ ဘဲ အခြား ဆန်စပါးနဲ့ ရာဘာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ ပြောင်းလုပ်လာတယ်လို့ ဦးမိုင်အွန်က ပြောပါတယ်။
ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတွေ ပြန်ပြောချက်အရ သူတို့တောထဲမှာ စခန်းချပြီး သစ်ခုတ်နေတုန်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင် ၁၀၀ လောက် ရောက်လာပြီး သူတို့နဲ့ လိုက်ဖို့ ခေါ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်နက်ကိုင်အချင်းချင်း ပြောဆိုနေတဲ့ စကားသံတွေကို နားမလည်တဲ့အတွက် ဘယ်အဖွဲ့မှန်း မသိရကြောင်း၊ ပါသွားတဲ့သူတွေဟာ ရှမ်းနဲ့ လားဟူတွေဖြစ်ပြီး အသက် ၂၀ နဲ့ ၄၀ ကြား လူရွယ်တွေလို့ ဆိုပါတယ်။
ရွာသားတွေ ဖမ်းခေါ်ခံရပြီး နောက်ပိုင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနေတဆင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်မှူးနဲ့ ရဲစခန်းတွေကို တိုင်ကြားထားပေမယ့် လည်း မထူးတဲ့အတွက် မနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်း အန်အယ်လ်ဒီရုံး သွားဖွင့်တဲ့အခါ ပျောက်ဆုံးနေသူရဲ့ မှတ်ပုံတင် အထောက်အထားတွေနဲ့ အတူ လာရောက် တိုင်တန်းထားတာလို့ ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောပါတယ်။
ပျောက်ဆုံးသူစာရင်းနဲ့ အထောက်အထားတွေကို ရန်ကုန် အန်အယ်လ်ဒီရုံးချုပ်ကို ဆက်ပို့ထားတယ်လို့ ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီဗွီဘီက တာချီလိတ်မြို့နယ် ရဲစခန်းကို မေးမြန်းရာမှာ လူပျောက် ကိစ္စ လာရောက် တိုင်ကြားထားတာမရှိဘူးလို့ တာဝန် ကျရဲတဦးက ဖြေဆိုပါတယ်။
“လူပျောက်လာတိုင်တာလည်းမရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ အဲသတင်းတွေလည်း မကြားမိပါဘူး။”
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး မအူပင်မြို့နယ် မလက်တို ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းရှိ အသိမ်းခံရသော လယ်မြေများကို ပြန်လည်ရရှိရေးနှင့် ပတ် သက်၍ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်နေမည့် အစား ဒေသခံများဘက်က ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြင့် တရားဥပဒေ ဘောင် အတွင်းမှ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ဖြေရှင်းရန် ဒေသခံများအတွက် လိုအပ်သော လမ်းညွှန်မှုများကို ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပုသိမ်မြို့ပေါ်ရှိ ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ ကိုထွန်းထွန်းက ပြောသည်။
“ဆရာတော်များရဲ့ မိန့်မှာချက်အတိုင်း ဒေသခံတွေ ဥပဒေဘောင်ထဲက ဆော်ရွက်နိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ဘက်က ကူညီပါ့မယ်။ ဒီနေ့ အဲဒါကို စတင် အကောင်အထည် ဖော်ပါ့ မယ်” ဟု ကိုထွန်းထွန်းက ဆိုသည်။
ယနေ့ နောက်ဆုံး အခြေအနေအရ လုံခြုံရေးယူထားသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်နှင့် ဒေသခံများ ၂ ဖက်စလုံး တင်းမာမှုများ လျော့ကျသွားပြီ ဖြစ် ကြောင်း၊ တဖက်နှင့်တဖက် လက်နက်ကိုင်ဆောင်ကာ အသင့် အနေအ ထားမျိုး မပြင်ဆင်ထားတော့ကြောင်း ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းက စတင်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ဒေသခံများ ပဋိပက္ခ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှ ညနေပိုင်း အချိန်တွင် အပြန်အလှန် ရိုက်နှက်မှုများ ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ည ၇ နာရီအချိန်မှ သန်းခေါင် ၁၂ နာရီ အချိန်အတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၇ ဦးနှင့် အရပ်သား ၁၅ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာဖြင့် မအူပင်ဆေးရုံသို့ ရောက် ရှိလာခဲ့ကြောင်း မအူပင် ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်စိုးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒဏ်ရာရသော တပ်သား ရဲကျော်သူသည် ဓားခုတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးကြောင်း အစောပိုင်း သတင်းများက ရေးသားကြသော်လည်း မအူပင် ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်စိုးကမူ အဆိုပါရဲတပ် သား မျာ တုတ်ဒဏ်ရာကြောင့် ဦးခေါင်းရိုး ကျိုးပြီး ဒဏ်ရာပြင်းထန်သောကြောင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံးကြီးသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
ဒေသခံများက ကျည်ဆံ ထိမှန်သူ ၄ ဦးရှိသည်ဟု ပြောဆိုကြသော်လည်း ကျည်ဆံထိမှန်သော ဒဏ်ရာဖြင့် အရပ်သား လူနာများ ရှိမရှိကိုမအူ ပင် ဆေးရုံက အတည်ပြုချက် မပေးပေ။ အသားကို ဖောက်ထွင်း သွား သည့် ဒဏ်ရာများ တွေ့ရှိရသော်လည်း ဒဏ်ရာထဲတွင် ကျည်ဆံ မတွေ့ရှိရကြောင်းနှင့် ဒေသခံလူနာများကို ရာဇဝတ်မှု လူနာ (PC) အဖြစ် ဆေးကုသပေးခြင်းမျိုး မရှိကြောင်းလည်း ဒေါက်တာ မြင့်စိုးက ပြောသည်။
အသိမ်းခံထားရသော လယ်များသည် မိမိတို့ဘ၀အတွက် အရေးပါသောကြောင့် ထိုလယ်များကိုသာ ပြန်လိုချင်ကြောင်း မအူပင်ဆေးရုံတွင် တက်ရောက်ကုသမှု ခံယူနေရသည့် မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စု၊ အ ဓိတ်ကျေးရွာမှ မစိန်ဝင်းက ဆိုသည်။
“ဒီလို အရိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ပက်သက်ရင် ကျမကတော့ ဒီလယ်ပဲ လိုချင်တယ်။ ဒီလယ် သိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ အချိန်ကတည်း ကို က ကျမတို့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရ တယ်။ အဲဒီဒဏ်ကို မခံနိုင်လို့ ထဖြစ်တာပါ။ သေသေကြေကြေဆိုပြီး ရင်ဆိုင်ကြတာ။ ရခွင့်ရထိုက် ရှိရမယ်ဆိုပြီး ရင်ဆိုင်တာ” ဟု မစိန်ဝင်းက ပြောသည်။
မအူပင်ဆေးရုံတွင်ပင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေရသည့် ရဲတပ်သား အောင်စိုးနိုင်က မိမိတို့ အကြီးအကဲများက ဒေသခံများနှင့် ညှိနှိုင်းသော်လည်း ဒေသခံများက လက်မခံသည့်အတွက် အကြီးအကဲများက အမိန့်ပေးသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုအဓိကရုဏ်း ဖြစ်နေသည့် အ ချိန်တွင် မိမိသည် အရှေ့ဆုံးနေရာတွင် ရှိမနေသောကြောင့် မည်သည့်ဘက်မှ စတင် ရိုက်ပုတ်ကြသည်ကို မသိကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြော သည်။
မိမိတို့သည် နိုင်ငံရေး ဆိုသည်ကိုလည်း နားမလည်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အပေါ်တွင်လည်း မည်သို့မျှ မှတ်ချက် မပြုလို ကြောင်း ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
“ကျနော်တို့လည်း မဖြစ်စေချင်ပါဘူးဗျာ။ ကျနော်တို့က အဓိကရုဏ်းတွေကို ဖြေရှင်းရမယ့် စည်းကမ်းအတိုင်း သူတို့ကို ကြေညာတယ်။ ကျ နော်တို့က ညှာပါတယ်။ ကျနော် တို့ လုပ်ချင်ရင် သူတို့နာကြမှာပေါ့။ အမျိုးသမီးတွေက ရှေ့မှာနေကြတာ” ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင်ရှိသည့် အခြေအနေထက် ကျော်လွန်ပြီး ဒေသခံများအပေါ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမျိုး မရှိကြောင်း၊ ပြည်သူများ ဘက် မှလည်း ဥပဒေနှင့် တာဝန်များကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ပြီး မလိုက်နာ သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ မဖြစ်သင့်သည်များ ဖြစ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မအူပင်မြို့နယ် ရဲမှူး တင့်ဆွေက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက် နေ့ညတွင် ရွှေည၀ါဆရာတော် အပါအ၀င် ဆရာတော်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်က လျှောက် ထား ခဲ့သည်။
ဆရာတော် အရှင် ဝီရသူက “ဒီပဋိပက္ခတွေ ဖော်ဖို့က မျှတဖို့လိုတယ်။ ဖြေရှင်းပုံ ဖြေရှင်းနည်းက နည်းလမ်းကျပေမယ့် ရွာသားတွေက အာ ဏာပိုင်တွေဘက်ကို ယုံကြည်မှု မရှိကြသေးဘူး။ အဲဒါကို ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ လိုတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ကလည်း ထင်သာမြင်သာ ရှိဖို့လိုတယ်” ဟု ပြန်လည်မိန့်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဖေ့စ်ဘုတ် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွင် အဓိကရုဏ်းနှင့် ပတ်သက်၍ မလက်တို ကျေးရွာအနီး အော့ချက်ဒ် ကုမ္ပဏီပိုင် ဧက ၅၅၀ ရှိ ငါးမွေးကန်၌ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ဗေဒါ စာသင်ကျောင်းမှ လင်းပိုင်စိုး၏ လှုံဆော်မှုဖြင့် လူအင်အား ၁၀၀ ခန့်က စပါး စိုက်ပျိုးရန် အကြောင်းပြ၍ ဥပဒေမဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ မြင့်စိန်က အမှုဖွင့် တိုင်ကြား ခဲ့သဖြင့် မြို့နယ်အဆင့် တာဝန်ရှိသူများက လာရောက်ဖျောင်းဖျခဲ့ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင်လူအုပ်စုမှာ ၂၀၀ ဦးအထိရှိလာပြီးပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားသည်။
ဆက်လက်၍ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ရာတွင် လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့က လက်နက်များဖြင့် ခြောက်လှန့်လူစုခွဲခဲ့ကြောင်းနှင့် အခင်းဖြစ်ပွားရာတွင် မအူ ပင်ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဆက်လက် တာဝန်ယူ စောင့်ကြပ်လျက် ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် ထမံသီတွင် လူ ၃၃ ဦး အဆိပ်သင့်၊ ၆ ဦးသေဆုံး
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် ထမံသီကျေးရွာမှာ လူ ၃၀ ကျော် အဆိပ်သင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အနက် ၆ ဦး သေဆုံးသွားတယ်လို့ ထမံသီဆေးရုံက ပြောပါတယ်။
ထမံသီကျေးရွာအုပ်စု သစ်ပါးလွှာစက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ အဆိပ်သင့်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ နေ့ခင်း ၂ နာရီကျော်က ဆေး ရုံရောက်လာကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၃ ဦးက သေဆုံးနေပြီး ကျန်တဲ့ ၃ ဦးကတော့ ညနေ ၅ နာရီကျော်လောက်မှာ ဆုံးသွားတာလို့ ထမံသီဆေးရုံ သူနာပြုဆရာမ ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ သေဆုံးသူတွေဟာ တကိုယ်လုံး ပြာနှမ်းသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခုလောလောဆယ် ဆေးရုံမှာ အဆိပ်သင့်လူနာ စုစုပေါင်း ၂၇ ဦးရှိပြီး အမျိုးသား ၁၃ ဦးနဲ့ အမျိုးသမီး ၁၄ ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ အခြေအနေ မစိုး ရိမ်ရကြောင်း၊ အဆိပ်သင့်ရခြင်း အကြောင်းရင်းကို အတိအကျ မသိရသေးပေမယ့် သူတို့နေ့ခင်းက စားသုံးခဲ့တဲ့ အစားအစာတွေကို ဓာတ် ခွဲ စစ်ဆေးဖို့ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်ကနေ မုံရွာ အဲဒီကမှတဆင့် တိုင်းရုံးကို ပို့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့အကုန်လုံးဟာ လပြည့်နဂါးကုမ္ပဏီပိုင် သစ်ပါးလွှာစက်ရုံက ၀န်ထမ်းတွေဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းဝန်ထမ်း ၄၀ ရှိကြောင်း၊ ၀န်ထမ်းတွေကို စက် ရုံက နေ့တိုင်း စရိတ်ငြိမ်း ချက်ပြုတ် ကျွေးမွေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအဆိပ်သင့်မှုကို နိုင်ငံတော်အစိုးရ ပြန်ကြားရေးဌာနကလည်း ဒီနေ့ နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပြီး အလုပ်သမားတွေဟာ မနက် ၁၁ နာရီက အသားခြောက်ကျော်၊ ဘူးသီး၊ ပဲသီးနဲ့ ပဲပွားပါ စုပေါင်းဟင်းကို ကျား ၁၉ ဦးနဲ့ မ ၁၄ ဦးတို့ စားသုံးခဲ့ကြောင်း၊ စုစုပေါင်း အမျိုးသား ၆ ဦး သေ ဆုံးခဲ့ရာမှာ ၅ ဦးက မုံရွာမြို့ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်က ဖြစ်ပြီး ၁ ဦးက ညောင်ပင်ဇောက်ရပ်ကွက်ကလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဆိုပါစက်ရုံမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်နေ့တုန်းကလည်း ပထမအကြိမ် အစာအဆိပ်သင့်ခဲ့လို့ လူ ၃၂ ဦး ဆေးရုံတက်ခဲ့ရပြီး အမျိုးသမီး ၂ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေ ဆက်ပြီးတင်ပြသွားမယ်လို့ နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနက ဖော်ပြသွားပါတယ်။
RCSS/SSA တပ်များ ဆုတ်ခွာရန် ဖိအားပေး တိုက်ခိုက်ခံရ
ရှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကောင်စီ (RCSS/SSA)အား ၄င်းတို့ တပ်စခန်း ၂ ခုမှ ဆုတ်ခွာသွားရန် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့က ဖိအားပေး တိုက် ခိုက် နေသည်ဟု အဖွဲ့၏ ပြောခွင့်ရသူ ဗိုလ်မှူး ဆိုင်းလောင်စိုင်းက ပြောသည်။
“ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း မိုင်းတုံမြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းတိုင်းရဲ့ အခြေချ စစ်ဗျူဟာ တခုနားပေါ့ဗျာ၊ အဲဒီနားမှာ ရှိတဲ့မိုင်းထားမြို့နယ် ခွဲမှာ တနေရာ၊ ပြီးတော့ ဟိုမိန်မြို့နယ်ခွဲမှာ တနေရာ အဲဒီက ကျနော်တို့ စခန်း၂ ခုကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ မိုင်းထား ဗျူဟာမှူးက ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ မှာ စာဖြင့် အကြောင်းကြား ထားတယ်။ နှုတ်နဲ့လည်း ပြောလာတယ်။ ပြောပြီးတာနဲ့ နောက်နေ့ ဖေေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့မှာ တပ်အင်အားနဲ့ လာပြီး စတင် တိုက်ခိုက်တော့တာပါဘဲ။” ဟု ဆိုသည်။
ဖေဖော်ဝါရီက၂၅ ရက်နေ့က အစိုးရ၏ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ ခြေလျင်တပ်ရင်း ခလရ ၆၆ တပ်ဖွဲ့မှ ခိုလံမြို့နယ်ခွဲ ခိုအွတ် ကျေးရွာသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး နံနက် ၁၀ နာရီခွဲ အချိန် တွင် RCSS/SSA နယ်မြေခံ တပ်ဖွဲ့နှင့် ၁၀ မိ နစ်ခန့်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ယင်းတိုက်ပွဲ၌ အစိုးရဖက်မှ (၅) ဦး ကျဆုံးခဲ့သည်ဟု RCSS ဖက်ကဆိုသည်။
အစိုးရ မိုင်းထား ဗျူဟာမှူးသည် RCSS/SSA ၏ မိုင်းထားမြို့နယ်ခွဲ၊ လွယ်မွတ်- နမ့်လန်တောင်ကျောရှိ နယ်မြေခံတပ် စခန်း နှင့် ဟိုမိန်းမြို့နယ်ခွဲ၊ လွယ်လန်း တောင်ကုန်း၌ ရှိသည့်စခန်းတို့ကို လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈) ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထား ပြီးဆုတ်ခွာပေးရန် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်နေ့က စာရေး အကြောင်းကြား ခဲ့သည်။
ယင်းနေရာကို ဆုတ်ခွာ ပေးခြင်း မပြုပါက တပ်အင်အားဖြင့် လာရောက် တိုက်ခိုက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရတပ်ဖွဲ့ ဘက်မှ ပြောဆို ခဲ့ သည်ဟု ဗိုလ်မှူး ဆိုင်လောင်စိုင်းက ဆိုသည်။ ယင်းကိစ္စအပေါ် RC SS/SSA ဥက္ကဌ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်ဆစ်မှ သမ္မတထံ လိပ်မူ၍ ထိုနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲကို အကြောင်းပြုပြီး စာတစ်စောင် ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
“နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ရရှိထားတဲ့ သဘော တူညီချက်များ အတိုင်း အစိုးရဘက်မှ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့၊ အကယ်၍တိုက်ပွဲ တွေဆက်ဖြစ်ပွား နေပါက ယုံကြည်မှု တည် ဆောက်တဲ့ နေရာမှာ ထိခိုက်စေတယ်။ အဲဒီ အဆိုပါတဲ့ စာတစောင်ကို ကျနော်တို့ဥက္ကဌက သမ္မတဦးသိန်း စိန်ထံ လိပ်မူပြီး ဒီနေ့ ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။” ဟု ဆိုသည်။
RCSS/SSA ဘက်မှ အစိုးရ တပ်ဖွဲ့၏ ရာဇသံအတိုင်း တပ်ဆုတ်ပေးရေးကို ဆုံးဖြတ်ချက်များ မချမှတ်ရသေးကြောင်း ဆိုသည်။ RCSS/SSA သည် ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့နှင့် ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၉) ရက်နေ့က ရေရှည် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ရရှိရေးအ တွက် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
RCSS/SSA နှင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့တို့ သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့က အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ရရှိ ခဲ့ရာ သဘော တူညီချက်များအနက် ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်းရှိ မိုင်းထားမြို့နယ်ခွဲတွင် RCSS ၏ ဗဟို ဌာနချုပ် ထား ရှိရန်နှင့် ဟိုမိန်းမြို့နယ်ခွဲတွင် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဖွံ့ဖြို့ရေး အထူးဇုံ နေရာအဖြစ် ထားရှိရန် သဘောတူ ခဲ့သည်။
သိမ်းဆည်းခံ တွံတေးဒေသခံ လယ်မြေများ ပြန်လည်ရရှိရန် KPP ကြိုးပမ်းသွားမည်
တွံတေးမြို့နယ်အတွင်းရှိ သိမ်းဆည်းခံထားရသော လယ်ယာမြေများ ပြန်လည် ရရှိရန် ဌာနဆိုင်ရာ အဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြ၍ ဆက်လက် ကြိုးစားပေး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ-KPP က ယမန်နေ့က ပြောကြားလိုက် သည်။
ကရင်လူမျိုး အများစု နေထိုင်သော ရေတွင်းကုန်းရွာ၊ ထော်ကူးရွာ၊ မရမ်းတပင် ရွာများမှ ဧက ၂,၈၀၀ကျော်ရှိ လယ်မြေများကို မြန်မာအစိုးရ၏ စစ်တပ်များနှင့် အ ထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတို့မှ သိမ်းဆည်း ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KNPP တောင်ပိုင်းခရိုင် ဥက္ကဌ မန်းအုန်းမြင့်သိန်းက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
“လယ်သမားတွေရဲ့ ဒုက္ခအခက်အခဲတွေကို ကျနော်တို့က အနီးကပ် သိနေခဲ့ပါ တယ်။ ကျနော်တို့ ဥပဒေကြောင်းအရ ဌာနဆိုင် ရာအဆင့်ဆင့်ကို တင်ပြသွားပေး ပါ့မယ်။ လယ်သမားတွေဟာ အရင်က မပြောရဲ မဆိုရဲခဲ့ကြဘူး။ အခုလို အချိန် ရောက်မှ ကိုယ့် ဘိုးဘွားပိုင်မြေတွေကို ပြောခွင့်ရပြီး ပြန်တောင်းဆိုနေ ကြ တာ ပါ”ဟု မန်းအုန်းမြင့်သိန်းက ပြော ဆိုသည်။
ထို့အပြင် လယ်ယာမြေများကို သိမ်းဆည်းပြီး ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်သူဌေးများအား ငါးမွေးကန်များ၊ အရက်ချက်စက်ရုံများအ ပြင် သီးစားချ၍ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခွင့် များ ပေးထားကြောင်းလည်း သူက ဆက် ပြောသည်။
ရေတွင်းကုန်းရွာရှိ လယ်သမားတစ်ဦးကလည်း “ကျနော်တို့ စစ်တပ်ကို သီးစားခပေးပြီး ဆက်လုပ်စားနေပါတယ်။ကိုယ်တစ်သက်လုံးလုပ်စား လာခဲ့တဲ့ လယ်ကို သီးစားခ ပေးလုပ်နေရတာ ရင်နာဖို့ ကောင်း ပါတယ်။ ကျနော်တို့ထက် ပိုပေးနိုင်တဲ့သူတွေ ကိုလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးမယ် ဆို တဲ့ အသံတွေလည်း ကြားနေ ရပါတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ယင်းအခြေအနေများကြောင့် ထော်ကူးရွာရှိ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေသော လုပ်ငန်းရှင် ဦးအေးသောင်းထံ သွားရောက်တွေ့ ဆုံ၍ မည် ကဲ့ သို့ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိကြောင်း ကို မေးမြန်းရာ တွံတေးမြို့ရှိ အထူးစုံ စမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန တာဝန်ခံအရာရှိ မိုးကျော်ထူး နှင့် မြေစာရင်းရုံးချုပ်သို့သာ သွားရောက်မေးမြန်းပါရန် ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။
သိမ်းဆည်းခံရသော လယ်ယာမြေများမှ ထော်ကူးရွာရှိ လယ်မြေများမှာ ယခင်က တဧကလျှင် တင်း ၉၀ကျော်ထွက်ခဲ့သော လယ်မြေ များ ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာသမ၀ါယမပိုင် လယ်မြေများ ပါဝင်သကဲ့သို့ တနိုင်ငံ လုံးရှိ သမအသင်းများသာမက အစ္စရေးနိုင်ငံမှ ILO အကြံပေး Mr. A.L Madi မှ ၁၉၈၆ခုနှစ်က လာရောက်လေ့လာခဲ့သော စံပြစိုက်ကွင်းများ ဖြစ်သည်။
သမ္မတနဲ့ နော်ဝေရောက် မြန်မာတွေ တွေ့ဆုံပွဲအတွက် အခမ်းအနားမှုး အဖြစ် တာဝန် ယူသူကတော့ တချိန်က အတိုက်အခံ သတင်းဌာန ဒီမို ကရေစီရေး သတင်းဌာန အဖြစ် လူသိများခဲ့တဲ့ DVB သတင်းဌာန မှ ဒုညွန်မှုး ကိုခင်မောင်ဝင်း ဖြစ်နေတာကို ထူးထူးခြားခြား တွေ့ရပါတယ်။
ဒီအခန်းအနားအတွင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန် အဓိကပြောသွားတာကတော့ နော်ဝေနိုင်ငံကို ဘာကြောင့် ပထမဆုံး လာဖို့ရွေးချယ်ခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာ လက်တွဲ ပါဝင်ကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကို ပ ထမဆုံး ထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံဟာ နော်ဝေးဖြစ်ကြောင်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အဓိကကူညီနေပြီး အင်းလေး ထိန်း သိမ်းရေးကို သမ္မတက ဥပမာပေး ထောက်ပြသွားပါတယ်။
ပြီးတော့ နော်ဝေနိုင်ငံဆီ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် ကျန်နေတဲ့ ခရိုနာ ၃ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၅၄၀ ခန့်)ကို နော်ဝေအစိုးရက လျှော်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ ဒီအတွက် လူကိုယ်တိုင်လာပြီး ကျေးဇူးတင်စကား လာပြောတာဖြစ်တယ်လို့ ဦးသိန်း စိန်က ဆိုပါတယ်။ တခါ နော်ဝေက ဒီလို အကြွေးလျှော်လိုက်တဲ့အတွက် တခြားနိုင်ငံတွေကလည်း အလားတူအကြွေးတွေ လျှော်ကြ တာ ကြောင့် အခုဆိုရင် ကြွေးဟောင်းကျေလို့ ကြွေးသစ်ပြန်ချေးနိုင်ပြီ။ IMF, ADB, ODA တို့ကနေ အတိုးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ နှစ် ၄၀ စာချေးဖို့ပြင်နေပြီး အဲဒီချေးငွေတွေနဲ့ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်မယ် လို့ သမ္မတက ရှင်းပြပါတယ်။
ပြီးတော့ KIA နဲ့ဆွေးနွေးမှု နောက်ဆုံးအခြေနေကိုပြောပြီး အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ထားရုံနဲ့မရ နိုင်ငံရေးအဖြေရတဲ့အထိ ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပါ ကာကွယ် ပေးဖို့ လိုနေတယ်လို့ သမ္မတက ထည့်ပြောသွားပါတယ်။
သမ္မတပြောတဲ့ နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ ”ခင်ဗျားတို့တတွေ ဘယ်နိုင်ငံကိုပဲ ရောက်နေနေ၊ ခင်ဗျားတို့ အားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်း သားတွေ ဖြစ်တယ်’။ ကျ နော် တို့ အချင်းချင်းကြားမှာ အားလုံး တူညီချင်မှ တူညီကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ် ချစ်တဲ့စိတ်က တော့ တူကြပါတယ်” လို့ သမ္မတက ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ”မတူတာတွေကို ဘေးဖယ်ပြီး တူတာတွေကို တွဲလုပ်ဖို့ အချိန်တန်နေပြီ၊ ပြည် ထောင်စု ချစ်စိတ်ပေါ်အခြေခံပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံ အကျိုးအတွက် တဖက်တလမ်းက လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြပါ” လို့ သမ္မတက တိုက်တွန်းသွား ပါ တယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ၅ မိနစ်ပဲ အမှာစကားပြောပြီး ပရိသတ်မေးတာကို ၀န်ကြီးအဖွဲ့က ဖြေပေးပါလိမ့်မယ်၊ သူ့မှာ တခြားကိစ္စရှိသေးတယ်လို့ ပြောပြီး ပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သမ္မတ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးရဲထွဋ်က တခုခုပြောမလားလို့ ထင်ထားပေမယ့် တကယ်တန်း ဒိုင် ခံပြောသွားသူကတော့ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း တဦးတည်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေ တပ်ဦးစီးချုပ် စစ်ဗိုလ်ဘ၀နေ ၀န်ကြီးဖြစ်လာသူပါလို့ မိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ နိဒါန်းချီလိုက်တဲ့ ဦးစိုးသိန်းဟာ မိနစ် ၂၀ လောက်အထိ မနားတမ်း ပြောနေတဲ့အတွက် ပရိသတ်ကို မေးခွင့်ပေးပါဦး၊ အချိန် သိပ်မရဘူး လို့ အခန်းအနားမှုးက ၀င်ပြောရတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ”၀န်ကြီးကသိပ် ပွားတာပဲ” ဆိုပြီး ပရိသတ်တဦးက ထပြောတဲ့အထိလည်း ၀န်ကြီးက စကားကို အပြော မရပ်ပါဘူး။ (အခန်းအနားတခုလုံးအတွက် အချိန် တ နာရီစာပဲပေးထားကြောင်း ဖိတ်စာမှာ အတိအလင်း ဖော်ပြထားပါတယ်)
မိနစ် ၂၀ ကျော်ကြာ မိန့်ခွန်းအတွင်း ၀န်ကြီးဦးစိုးသိန်း အဓိကပြောသွားတာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ် တာကာလ သူတို့အစိုးရသစ်ဆောင် ရွက်ခဲ့ရတဲ့ ”စစ်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေး ကနေ အရပ်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးသို့ ပြောင်းလဲခြင်း” ဖြစ်စဉ် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပုံအကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြု ပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်တဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံရေးရော၊ စီးပွားရေးပါ တပြိုင်တည်း တိုးတက်လာ အောင် ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ၀န်ကြီးက ဆိုပါ တယ်။
နောက်တခါ ဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်တဲ့အခါမှာ ပြောင်းလဲရေး မလိုချင်သူတွေနဲ့လည်း ရင်ဆိုင်ရကြောင်း၊ သူ့လို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ် ချင် သူ အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ အားနည်းနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် အပြင်က အင်အားစုတွေအပါအ၀င် ဒီမိုကရေစီအင်အားစု အားလုံးက ၀ိုင်းကူလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ ၀န်ကြီးက ဆိုပါတယ်။ ”အခုဆိုရင် ဦးသိန်းစိန်ကလည်း ဒီမိုကရေစီ၊ ခင်ဗျားတို့လည်း ဒီမိုကရေစီ၊ ဒီမိုကရေစီဆီ သွားနေသူကို ခဲနဲ့ပေါက်ရင်တော့ ဆက်လုပ်မယ့်သူမရှိဘူး ဖြစ်သွားနိုင်တယ်၊ ဒါကိုတော့ ခင်ဗျားတို့ သတိထားဖို့ လိုပါတယ်” ဆိုပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုဝိုင်း ထောက်ခံကြဖို့ ၀န်ကြီးက တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
၀န်ကြီးအဖွဲ့အတွက် ပထမဆုံး မေးခွန်းကတော့ ၂၀၁၅ မှာ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေဖက်က ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရင် စစ်တပ်က အာဏာမ သိမ်း ဘူးလို့ ၀န်ကြီးအာမခံသလားတဲ့။ ဒီအတွက် ဦးစိုးသိန်းရဲ့ အဖြေက တော့ ပြည်သူတွေ နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်။ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ သိမ်းလို့လည်း မရဘူး၊ အခြေနေတွေက ပြောင်းသွားခဲ့ပြီ။ အီဂျစ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ လတ်တလော အခြေနေတွေကိုသာ ကြည့်ပါ ဆိုပြီး ၀န်ကြီးက ဥပမာပေး ဖြေကြားသွားပါတယ်။
War Crime စစ်ရာဇ၀တ်မှု ကျုးလွန်ခဲ့သူတွေကို လက်ရှိအစိုးရက ဘယ်လို အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိသလဲ ဆိုတာဖြစ်ပြီး ဒီမေးခွန်း ကိုကြားတော့ ပရိသတ် အတော်များများ လက်ခုတ်ထ တီးကြပါ တယ်။ ဒီမေး ခွန်း အတွက် ဦးစိုးသိန်းရဲ့အဖြေကတော့ ”ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေ စီကိုပဲ သွားချင်ပါတယ်။ အရေးယူတဲ့ အပိုင်းကို ပထမ ဦးစားပေးနေရာမှာ မထားချင်ပါဘူး” ။ ဒါကို ပထမနေရာထားရင် ရှေ့မတိုးနိုင် ဖြစ်နေ လိမ့်မယ်။ အရေးယူတာက နောက်တပိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နောက်တခါ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအရ စစ်တပ် လက်ထဲမှာ အာဏာ အများကြီး ရှိနေတယ်၊ သမ္မတထက် ကာချုပ်က ပို အာဏာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုလဲ ဦးစိုးသိန်းက မဟုတ်ပါဘူးလို့ ငြင်းဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ပြု ပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာ အင်ဒိုနီးရှားထက် အခြေအနေ ပိုကောင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား ပါလီမန်ထဲက စစ်သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ထွက်ဖို့အတွက် ပါလီမန် သက်တန်း နှစ်ခါစောင့်ခဲ့ရပေမယ့် မြန်မာ နိုင်ငံမှာ အဲဒီ လောက်အထိ စောင့်စရာ မလိုလောက်ပါဘူးလို့ ဦးစိုးသိန်းက ခန့်မှန်းပါတယ်။
ပြီးတော့ ”ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ Icon ဖြစ်သလို သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာလည်း လက်ရှိသွားနေတဲ့ Reform ရဲ့ Icon ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနှစ်ဦးကို ခင်ဗျားတို့ ကူညီဖို့ လိုတယ်” လို့ ဦးစိုးသိန်းက တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။
သမ္မတနဲ့အဖွဲ့ မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရာ Litteratur huset အပြင်ဖက်မှာတော့ ရိုဟင်ဂျာ သို့မဟုတ် ဘင်္ဂလီ အင်အား ၁၀ ကျော် ဆိုင်း ဘုတ်တွေ ထောင်ပြိး ဆန္ဒပြနေပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့က ဘယ်လိုကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းမှာလဲ။ ရခိုင် ပဋိပက္ခ စုံစမ်းရေး ကော်မ ရှင် အစီရင်ခံစာ ဘယ်တော့ ထွက်လာမလဲ။ မေးစရာတွေ ကျန်နေဆဲပါ။
ဒီလို စဉ်းစားရင်း အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ကွန်ပြူတာဖွင့်လိုက်တော့ ပထမဆုံး တွေ့ရတဲ့ ထူးခြားသတင်းက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၁ နှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စု ကြည် နိုဘဲလ်ဆုရပြီးချိန်ကတည်းက စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ နော်ဝေ အ ခြေစိုက် DVB သတင်းဌာနရဲ့ အသံလွှင့်မှု အားလုံးကို နော်ဝေးမှာ လုံးဝမထားတော့ဘဲ အမိမြေကို ပြန်တော့မယ်လို့ ဒုညွန်မှုးကပြောတယ် ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ နော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့ NRK သတင်းဌာန ၀က် ဆိုက်မှာ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွ ရှင်းပြထားပြီး ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အင်တာဗျူးကို လွင့်ပြီးတဲ့နောက် DVB နော်ဝေးကနေ ထုတ်လွှင့်မှု အားလုံးကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါပြီလို့ ကြေညာ ထားပါတယ်။
တဆက်တည်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ခရီးစဉ်အပေါ် နော်ဝေ မီဒီယာတွေ ဘယ်လိုမြင်ကြသလဲဆိုပြီး လိုက်ဖတ်တော့ နော်ဝေးအစိုးရက ရှယ် ယာ အများစုထည့်ထားတဲ့ Statoil ရေနံကုမ္ပဏီနဲ့ Telenor ဆက် သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတို့ မြန်မာနိုင်ငံဆီ ၀င်ဖို့ ပြင်နေကြောင်း ရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ တခါ နော်ဝေးနဲ့ မြန်မာဟာ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထွက်တာ၊ ပင်လယ်ပြင်နဲ့ သစ်တောတွေရှိတဲ့နေရာ၊ သယံဇာတ ကြွယ်ဝတဲ့ နေ ရာမှာ တူညီနေတယ်လို့ နှိုင်းယှဉ်ပြထားတာကိုလည်း ဖတ်ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလို သယံဇာတ ကြွယ်ဝမှုအပေါ် အခြေခံပြီး တိုင်းပြည် ချမ်းသာလာအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ နော်ဝေနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့အဖွဲ့ လာလေ့လာတာလား။ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်သာ မှန် မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ ဆင်းရဲတွင်းကနေလွတ်အောင် ဒီသယံဇာတတွေက ကူညီနိုင်ပါတယ်။ နော်ဝေနိုင်ငံရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကလည်း နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွန်းတွေနဲ့အညီ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံဖြိုးရေးအတွက် ကူ ညီနိုင်ပါ လိမ့် မယ်လို့ ရေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါဆို ဒီလို ဖြစ်လာစေဖို့အတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက မှန်ကန်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တခုကို ဘယ်တော့လောက် ဘယ်လိုစတင် ကျင့် သုံး နိုင်မလဲ။ ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကရော ဒီ လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် ဘာတွေများ ဘယ်လောက် ကူညီပေးနိုင်လေမလဲ။
လယ်သမားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကြားပဋိပက္ခ လူ ၁ဦးသေ ၄၂ဦးဒဏ်ရာရ
မြန်မာနိုင်ငံ ​ဧရာဝတီတိုင်း ​မအူပင်မြို့နယ်က ​ပုဂ္ဂလိကပိုင် ​ကုမ္ပဏီနဲ့ ​လယ်သမားတွေကြား ​နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုပြသနာဆန္ဒပြမှုမှာ ​လယ်သမား ရွာ သားတွေနဲ့ ​ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ ကြား ​ ပဋိပက္ခ ​ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ​အတွက် ​ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦး ​သေဆုံးခဲ့ပြီး ​လူပေါင်း ​၄၂ဦး ​ထိခိုက် ​ဒဏ်ရာ ​ရခဲ့တယ်လို့ ​သိရ ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ​၂၆ရက်နေ့တုန်းက ​ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ​ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ​လယ်သမား ​၁၅ဦးထက်မနည်း ​ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး ​မအူပင် ​ဆေးရုံမှာ ​ဆေးကု သ မှုခံယူနေရတဲ့အကြောင်း ​ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကတော့ ​၁ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ​၂၇ဦးဒဏ်ရာရပြီး ​ဆေးကုသမှု ​ခံယူနေတယ်လို့ ​ဆိုပါ တယ်။ ​
ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ ​ဒေသခံ ​အာဏာပိုင်တွေက ​ကာဖူ ​အမိန့်ထုတ်ပြန်ထား ​လိုက်ပါတယ်။ ​ကာဖူးအမိန့်ကြောင့် ​ပဋိပက္ခမှာပါဝင်တဲ့ ​လယ် သ မားတွေဟာ ​ဖမ်းဆီးခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက် ​အိမ်ပြန်မအိပ်ပဲ ​ပုဒ်မ ​၁၄၄ထုတ်ထားတဲ့နယ်နမိတ်အပြင်ဘက်မှာပဲ ​စုပြီးနေနေကြတယ်လို့ ​သိရပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေမှာ ​လယ်သမား ​၁၀၀ကျော်လောက်က ​အိမ်မပြန်ပဲ ​၁၄၄ထုတ်ထားတဲ့ ​ဧရိယာ ​အပြင်ဘက်မှာ ​နေနေကြပြီး ​ရဲအင်အား ​၂၀၀လောက်ကတော့ ​ပုဒ်မဧရိယာအတွင်းမှာ ​နေနေကြ ​တယ်လို့ ​လယ်သမားတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ ​မစုစုနွေးက ​အခုလိုပြေပြပါတယ်။ ​
“သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ ​အိမ်တွေပြန်ရောက်မှာ ​တယောက်ချင်းလိုက်ဖမ်းရင် ​ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ​ပေါ့နော်၊​လယ်သမားတွေဘက်ကချက်ချင်း ထောင်ထဲထည့်လိုက်မှာကို ​စိုးရိမ်တယ်၊ ​သူတို့ပေါ့ ​ဒီနေရာမှာပဲ နေမယ် ​သေချင်လည်းသေပစေပေါ့နော် ​သူတို့လူစုခွဲပြီးတော့အိမ်မပြန်ဘူးဆို ပြီးတော့ ​အဲဒီမှာရှိတယ်ရှင့်။”
နှစ်ဘက်ကြားမှာလည်း ​နောက်ထပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ကြဖို့ ​မနေ့ကနေ့လည်ပိုင်း ​လောက်မှာ ​ကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ တယ်လို့လည်း ​မစုစုနွေးက ​ဆက်ပြောပြပါတယ်။
“ရဲတွေဘက်ကလည်း ​နောက်ထပ်မပစ်ဘူးလို့ပြောတယ်၊ ​ကျမတို့တွေကကြားဝင် ​ညှိနှိုင်းပေးတာကို ​လည်း ​သူတို့ကလက်ခံတယ်၊ ​ကျမတို့ဘက်က ​လယ်သမားတွေနဲ့ ​ကုမဏီပိုင်ရှင်နဲ့ ​အစိုးရနဲ့ ​၃ဦး ​၃ဖလှယ်ကိုပေါ့ ​မီဒီယာတွေရဲ့ရှေ့မှာ ​ပွင့်လင်းမြင်သာစွာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ​ကျမတို့ဖက်က ​တောင်း ​ဆိုတယ်။”
ပြဿနာတွေပေါ်အောင် ​လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ​လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ ​ရဲသေဆုံးမှုအပါအ၀င် ​လယ်သမား ​တွေရဲ့ ​ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေကို ​ဖြေရှင်း ပေး ဖို့ ​လိုအပ်တယ်လို့ ​မစုစုနွေးက ​ပြောပါတယ်။ ​
ပုဒ်မ ​၁၄၄ဟာ ​ရပ်ကွက်၊ ​မြို့နယ်၊ ​တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီး ​အခြေအနေတွေ ​ထိန်းသိမ်းဖို့ ​ခက်ခဲ့ ​တဲ့အခါထုတ်ပြန်လေ့ရှိတဲ့ ​ဥပဒေဖြစ် ကြောင်း သိရပါတယ်။
အခုလယ်သမားတွေတောင်းဆိုနေတဲ့လယ်မြေတွေဟာ ​ငါးမွေးမြူရေးအပါအဝင် ​သစ်ခွပန်းစိုက်ပျိုးရေး ​နဲ့ ​တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေး ​ကုမ္ပဏီတွေက ​မြေတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
လယ်မြေ ​ဧက ​တစ်ထောင်ကျော်လောက်ဟာ ​လွန်ခဲ့တဲ့ ​၁ဝနှစ်ကျော်တုန်းက ​သိမ်းပိုက်ခံထားရတာ ​ဖြစ်တယ်လို့ ​လယ်သမားအရေးကိစ္စ ကို ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူကပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့ (ယာယီ) ကို တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် မှ ကိုယ်စာလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တောင်သူ လယ်သမား အရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး မြန် မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင်သူ လယ်သမားအဖွဲ့ (ယာယီ) ကို တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် ၁၄ ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း လိုက်သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့မှ ၂၆ ရက်အထိ ရန် ကုန်မြို့ ရွေဂုံတိုင်ရှိ Exile ဟိုတယ် တွင် ကျင်းပခဲ့သော နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲတွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရခိုင်ပြည် နယ် တောင်သူ လယ်သမား ကိုယ်စား လှယ် ကိုသန်းဌေးက နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။
“ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ၁၄ ခုက ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦးကျစီနဲ့ စုစုပေါင်း ၂၈ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ အဓိကတော့ တောင်သူ လယ်သမားတွေရဲ့ အရေးကိစ္စတွေကို ဆောင်ရွက် သွားဖို့ ရည်ရွယ် ဖွဲ့စည်းတာပါ” ဟု ကိုသန်းဌေးက ပြောသည်။
ဆွေးနွေးပွဲကို တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအ၀င် ဖိတ်ကြားထားသူများအပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၁၇၅ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမား အဖွဲ့အစည်း (ယာယီ) ဖွဲ့စည်းရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သူက ယခုလို ဆက် ပြောသည်။
“ မြန်မာ တောင်သူလယ်သမားတွေဆီက အစိုးရ အပါအ၀င် ကုမ္ပဏီတွေက မလိုအပ်ဘဲနဲ့ လယ်မြေတွေကို သိမ်းယူထားတယ်။ သိမ်းယူထား တဲ့ လယ်မြေတွေမှာ အစိုးရက လည်း ဘာမှ လုပ်တာ မဟုတ်ဘဲ သိမ်းထားတော့ လယ်သမားတွေ လယ် မလုပ်ရဘဲနဲ့ လယ်ယာမြေတွေ ဆုံး ရှုံးနေကြတယ်။ အဲဒီကိစ္စတွေကို ကျွန်တော်တို့က လေ့လာဆန်းစစ်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်အဆင့်ထိ လုပ်ဆောင်ပေးမယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျေး ရွာတွေမှာ တောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေ ဖွဲ့ပေးဖို့နဲ့ မတရားသိမ်းယူထားတဲ့ လယ်ယာမြေတွေကို ပြန်လည် ရရှိအောင် တောင် သူ လယ်သမားတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းရတာ ဖြစ်ပါ တယ်” ဟု ဆိုသည်။
လက်ရှိ အခြေအနေတွင် ယာယီအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် တောင်သူလယ်သမားများ၏ အရေးကိစ္စများကို လုပ် ဆောင်သွားမည်ဟု ပြောသည်။
“ ယာယီဆိုတာက လာမယ့်နှစ်မှာ ပြည်နယ် တိုင်းအဆင့်ကနေ ကျေးရွာအဆင့်ထိ မဲစနစ်နဲ့ ရွေးချယ်ပြီးတော့ တောင်သူတွေကိုယ်စား လှယ် တွေကို တင်ပေးမယ်။ ဒီလို ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့က ယာယီ ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ခါ ဒီယာယီအဖွဲ့ကဘဲ လယ်ယာမြေကိစ္စတွေကို ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
လက်ရှိတွင် တောင်သူလယ်သမားများ၏ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စ မှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စကို အဓိက လုပ် ဆောင်ပေးသွားမည်ဟုလည်း ကို သန်း ဌေးက ပြောသည်။
စစ်တပ်မှ လယ်ယာမြေများ သိမ်းဆည်းသည်ကို တောင်သူလယ်သမားများ မသိရှိရသကဲ့သို့ အသုံးမပြုသေးသည့်လယ်မြေအားအားပြန်လည် ပေးအပ်မည် ဆိုခြင်းကို ယနေ့အထိ မကြားသိသေးကြောင်း တောင်သူ လယ်သမားများက ပြောသည်။
စစ်တပ်မှ လယ်ယာမြေများကို သိမ်းဆည်းသည့်အခါ လယ်သမားများ ကိုယ်တိုင် မသိရှိကြကြောင်း၊ ပြန်ပေးမည်ဆိုရင်လည်းကျေနပ်စွာလက် ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လယ်ယာကို ကောင်းမွန်စွာ ပြန်လုပ် လို ကြကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ EXCEL HOTEL တွင် ကျင်းပသည့် မြန်မာနိုင်ငံ လုံး ဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမား နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့် ရွှေဘိုမြို့နယ်မှ ဦးစန်းထူးက ဆိုသည်။
“လယ်ယာတွေကို စစ်တပ်က ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ ယူသွားတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ တောင်သူတွေကို စစ်တပ်က ပိုင်တယ်ဆိုတာ လက် မှတ် လာထိုးခိုင်းတယ်။ အခု စစ် တပ်က လယ်ယာမြေကို ပြန်ပေးမယ်ဆိုတာ ဘာမှ မကြားရသေးဘူး” ဟု ဦးစန်းထူးက ဧရာဝတီသို့ ပြော သည်။
စစ်တပ်မှ သိမ်းဆည်းထားသည့် နေရာတွင် လယ်သမားများ သွားရောက်ကာ စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်သည့်အခါ တပ်မှူးများ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကိုခံနေ ရကြောင်း၊ စစ်တပ်နှင့် ကုမ္ပဏီများက ပူးပေါင်းကာ လယ်ယာမြေ များကို သိမ်းဆည်းခဲ့ ကြကြောင်း၊ လယ်ယာမြေများကို သိမ်းဆည်းမှုကိစ္စ အား စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်များကို တိုင်ကြားသည့်အခါ မည်သည့် ထုတ်ပြန်ချက်၊ အကြောင်းပြန်ချက်များ မရှိကြောင်း စစ်ကိုင်း တိုင်း ဒေသကြီး ကန့်ဘလူမြို့နယ် ချောင်းကန် ကျေးရွာမှ ဦးကျော်ဌေးက ရှင်းပြသည်။
“ကျနော့်ကို ဒီလယ်မှာလာပြီး စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ရင် ထောင်ချမယ်၊ နိုင်ငံပိုင် သိမ်းဆည်းတာ၊ နိုင်ငံတော်က စီမံကိန်းလုပ်ဖို့ ဆိုပြီးပြောတယ်။ ကျနော်တို့ လယ်သမားတွေက လယ် မရှိတော့ ဘာလုပ်စားရမှာလဲ။ စစ်တပ်က ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ၀မ်းသာ တာပေါ့” ဟု ၎င်းက ဧရာဝ တီသို့ ပြောသည်။
စီမံကိန်းများ အတွက် အသုံးပြုရန်ဟု ဆိုကာ တပ်မတော်က သိမ်းဆည်းထားသည့် လယ်ယာမြေ များကို တောင်သူ လယ်သမားများ သို့ ပြန် ပေးနိုင်ရန် စီစဉ်နေသော်လည်း ပြန်ပေးအပ်နိုင်မည့် အချိန်ကို အတိအကျ မပြောနိုင် သေးကြောင်း သမ္မတ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ပြန် ကြား ရေး ဒု ဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ဧရာဝတီသို့ ပြောခဲ့သည်။
“လယ်သမားတွေက လယ်ယာကို ဘယ်က ဘယ်သူ သိမ်းတယ်ဆိုတာ မသိဘူး။ သီးနှံသွားစိုက်မှဒီမြေကိုဘယ်သူပိုင်တယ်ဆိုတာပြောတယ်။ လယ်လာစိုက်ရင် ပုဒ်မ ၁၄၄ နဲ့ တရားစွဲမယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်ကြတယ်” ဟု ပြည်မြို့နယ်မှ ဦးထွန်းထွန်းက EXCEL HOTELတွင်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မီဒီယာများအား ပြောကြားခဲ့သည်။
လယ်ယာမြေနှင့် ပြန်လည်ရရှိဖို့ အတွက် တောင်သူလယ်သမားများ လယ်ယာပြန်လုပ်နိုင်ရန် ထွန်တုံး တိုက်ပွဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အတွက် ပုဒ်မ ၁၈ နှင့် တရားစွဲဆိုခံထားရကြောင်း၊ လယ်ယာမြေများ ပြန်ရရှိ ရန် ဆန္ဒထုတ်ဖော်နိုင်ရေး အတွက် တောင်းဆိုထားပြီး အာဏာပိုင်မှ ခွင့် ပြုသည်ဖြစ်စေ၊ မပြုသည်ဖြစ်စေ ဆန္ဒပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးထွန်းထွန်းက ဆိုသည်။
မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမား နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ တက်ရောက်သည့် တောင်သူများသည် မြေယာ မှတ်ပုံတင်ရန် အတွက် ရက်အကန့်အသတ်မရှိ လုပ်ဆောင်ပေးရန်နှင့် မသမာသည့်နည်း ဖြင့် မှတ်ပုံတင် ရရှိထားသော သူများကို သေချာစွာ စိစစ်ပေးရန်၊ လယ်ယာ မြေ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်နေသည့် ၀န်ကြီးဌာနများအား တရားစွဲဆိုခွင့် ပေးရန်၊၂၀၁၂ လယ်ယာမြေဥပဒေကို အောက်ခြေ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ များ အထိ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ဖြူးပို့ချရန်၊ တောင်သူ လယ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်သည့် ဥပဒေ တရပ်ပြဌာန်းရန်၊ တောင်သူလယ် သမား သမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေသစ် တရပ် ပြဌာန်းပေးရန် တောင်ဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တော်သူလယ်သမား ၁၅၀ ကျော်တက်ရောက်သည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နှင့် ၂၆ ရက်တို့တွင် ကျင်းပသည့် မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင် သူ လယ်သမား နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို စီစဉ်သူများက ကဏ္ဍ ၆ ခုဖြစ် သည့် တောင်သူနှင့် ချေးငွေ၊ စိုက်ပျိုးရေး စနစ်၊ အာမခံချက်ရှိသော ဈေး ကွက်၊ သီးနှံ မူဝါဒ၊ မြေယာ သိမ်းဆည်းမှု၊ လယ်ယာမြေ ဥပဒေ တို့အား လွှတ်တော်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ တင်သွားမည်ဟု သတင်း စာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျနော်ကတော့ လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံရမှု စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေ ဒေသကိုလာပြီး လေ့လာဖို့ပြောချင်တယ်။ တရား မျှတ မှန်ကန်မှုရှိအောင် လုပ် ဆောင် ပေးစေချင်တယ်” ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ကိုနိုင်စိုးက ပြောသည်။
တောင်သူ လယ်သမားများသည် နေရာ ဒေသအနှံ့တွင် နေထိုင်သည့်အတွက် တချို့ဒေသသို့သတင်းစာ၊စာစောင်များမရောက်ရှိခြင်းကြောင့် တောင်သူလယ်သမားများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းများကို FM ရေဒီယိုများမှ လွှင့်ပေး စေချင်ကြောင်း သူကဆိုသည်။
“ကျနော်တို့လည်း မြန်မြန် ပြီးချင်ပါတယ်။ တောင်သူ လယ်သမားတွေကလည်း လယ်တွေဆုံးရှုံး နစ်နာခဲ့သမျှ ပြန်ရ စေချင်တယ်။ အခုဆိုရင် လွှတ်တော်ကာလ ဆိုတော့ အဲဒီ ဒေသကို သွားလို့မရသေးဘူး” ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ရခိုင်ဒေသ လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံရမှု စုံ စမ်း ရေး အဖွဲ့ မှ ဦးဘရှိန်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လယ်ယာသိမ်းဆည်းမှုကြောင့် လာရောက်တိုင်ကြားသည့်အမှု ၁၄ မှုနှင့် တိုင်ကြားစာ ၆၀ ကျော်ရှိကြောင်း၊ ထိုတိုင်ကြား မှုတွင် စစ်တပ်က သိမ်းဆည်းမှု ၉ မှုခန့်ရှိကြောင်း၊ စုံစမ်းရေး ကော် မရှင်က ထုတ်ပြန်ရန် ကြာဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးဘရှိန်က ဆိုသည်။
ယခုလက်ရှိ အချိန်တွင် စစ်တပ်က လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့် အကြိမ်ကြိမ် တိုက်တွန်းခြင်း၊နစ်နာရသည့် တောင် သူများက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရှိ လယ်ယာမြေနှင့် တခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှု စုံစမ်းရေး ကော်မ ရှင်သို့ တိုင်ကြားလာခြင်းနှင့် မြေငှားရမ်း လုပ်ကိုင်မည့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက မြေပိုင်ခွင့် အငြင်းပွား မှုများကို ဖြေရှင်းရန် မြန်မာ အ စိုးရအပေါ် ဖိအားပေးလာကြခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာရာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က တိုင်တန်းချက်များနှင့် အမှုတွဲများကို စာရင်းပြုစု တင်ပြရန်နှင့် တပ်မတော်မှ သိမ်း ထားသော အသုံး မပြုသည့် မြေများ ပြန်ပေးရန်နှင့် စီမံကိန်း ဝင်နေသည့် လယ်မြေများအား လျော်ကြေး ပေး သွားရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်က ပြဌာန်းခဲ့သော လယ်ယာမြေ ဥပဒေ အခန်း ၁၁ အပိုဒ် ၃၂ တွင်လည်း နိုင်ငံတော် အကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေမည့် စီ မံကိန်းများ အတွက် လယ်ယာမြေ သိမ်းယူရာတွင် အနည်းဆုံး လိုအပ်သော ပမာဏကိုသာ သိမ်းယူ ရမည်၊ စီမံကိန်းအား သတ်မှတ်ကာလ အတွင်း အမြန်ဆုံး ပြီးစီးစေရန် အကောင်အထည် ဖော်ရမည်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုတော့ပါက မူလ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင် ခွင့် ရရှိထားသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းထံ ပြန်လည် ပေးအပ်ရမည်ဟု ပါရှိသည်။
တရုတ် - မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး အဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်သည့် မူစယ် - မန္တလေးလမ်းတွင် မိုဘိုင်း အဖွဲ့များက တရုတ် နယ်စပ်မှ တင် သွင်းသည့် ကုန်စည်များအပေါ် ဂျူတီခွန် ဆောင်ခိုင်းလျှက်ရှိရာ အ ကျိုးဆက် အနေဖြင့် ဗန်းမော် - လွယ်ဂျယ်လမ်းမှ တဆင့် တရုတ် ကုန် တင်သွင်းမှု ကျဆင်းလာကြောင်း သိရသည် ။
နယ်စပ်လွယ်ဂျယ်မှ သယ်လာသည့် တရုတ်ကုန်များ ဗန်းမော်မှ မန္တလေးသို့ တဆင့် ပြန်သယ်ရာတွင် ဂျူတီဆောင်ခိုင်း သည့် အကျိုးဆက် ကြောင့် ကုန်သည်များ အခက်အခဲ ဖြစ်လာကာ တရုတ်ကုန်တင် သွင်းမှု ကျဆင်းလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဗန်းမော်မြို့ခံ ကုန်သည် တစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည် ။
“အခု လွယ်ဂျယ် - ဗန်းမော်လမ်းမှာ ဘာကုန်မှမဆင်းဘူး ၊ မဆင်းသလောက်ပဲပေါ့ ၊ မူစယ် - မန္တလေးလမ်းဘက်မှာ မိုဘိုင်းတွေတအားဖမ်း လို့ မိုဘိုင်းက မန္တလေးမှာ ရှိတဲ့အခါကျတော့ ဗန်းမော်ကနေ မန္တလေးပြန်သယ်တဲ့အခါ အဖမ်းခံရ တယ်လေ။ ဒီကနေ ကုန်သည်နဲ့ ကာစ တန်နဲ့ပေါင်းပြီး ဂျူတီလိမ်တင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် မန္တလေးသယ်ဖို့ခက် တယ် ” ဟု ၄င်းကုန်သည်က ပြောသည် ။
တရုတ် - မြန်မာနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးလမ်းတွင် လွယ်ဂျယ် - ဗန်းမော်လမ်းသည် ဒုတိယအကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း တစ်ခု ဖြစ် သည် ။
အဆိုပါလမ်းမှတဆင့် ပုံမှန်အားဖြင့် တရုတ်ဘက်မှ အသီးအနှံ ၊ အထည်အလိပ် ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ၊ ဆိုင်ကယ် ထော်လာဂျီ နှင့် စက်အပိုပစ္စည်း ၊ လူသုံးအိမ်သုံးပစ္စည်း အမြောက်အများ တင်သွင်းနေသော်လည်း ယခုအခါ အသီးအနှံနှင့် လူသုံး အိမ်သုံးပစ္စည်း တချို့ တင်သွင်းမှုသာ ရှိ တော့ကြောင်း သိရသည် ။
အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်မှ တရုတ်ဘက်သို့ တရားမဝင် သစ်များ တင်သွင်းနေကြောင်း သိရသည် ။
မြန်မာအပေါ်ဆွီဒင်ဒဏ်ခတ်မှုလျော့ဖို့ သြစတြေးလျတိုက်တွန်း -
ဥရောပသမဂ္ဂကနေ ​မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာ ​ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့ ​ဆန်ရှင်ဒဏ်ခတ်မှုကို ​လုံးလုံးလျားလျားဖယ်ရှားဖို့ ​သြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ​Bob ​Carr ​က ​ဆွီဒင် ​နိုင်ငံ ခြား ရေးဝန်ကြီး ​Carl ​Bildt ​ကိုတိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံကို ​အလည်အပတ်ရောက် ​ရှိ ​နေတဲ့ ​ဆွီဒင် ​နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ​Carl ​Bildt ​က ​ဥရောပ ​သမဂ္ဂအနေနဲ့ ​တချိန်ချိန်မှာတော့ ​ဆန်ရှင်ဒဏ်ခတ်မှုတွေကို ​လုံးလုံးလျားလျား ​လျှော့ချပေး ​သွားဖို့ရှိတယ်လို့ ​ပြန်ပြီး ​တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
သြစတြေးလျနဲ့ ​ဆွီဒင် ​၂ ​နိုင်ငံက ​နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ​၂ဦး ​တို့ဟာ ​မနေ့က ​ကင်ဘရာမြို့မှာ ​တွေ့ ​ဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေ ​ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ​မြန်မာ ​နိုင် ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ​အကြောင်းတွေကို ​ဆွေနွေးခဲ့တယ်လို့ ​ဆွီဒင် ​နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ​Carl ​Bildt ​က ​ပြောပြပါတယ်။
ဆွီဒင် ​နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ​Carl ​Bildt ​က ​ဥရောပ ​သမဂ္ဂ ​အနေနဲ့မြန်မာ ​နိုင်ငံအပေါ် ​ချမှတ်ထားတဲ့ ​ဆန်ရှင်တွေကို ​လျော့ချဖို့ ​ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် လောက်က ​ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ​ရှေ့လာမည့် ​လပိုင်းတွေ ​အတော ​အတွင်း ​ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ​နောက်တကြိမ် ​စမ်းစစ် ​သုံးသပ်ပြီး ​ဆုံးဖြတ်ချက် ​အသစ်ချဖို့ ​ဖြစ်လာ ​တော့ ​မှာဖြစ်တဲ့ ​အကြောင်း၊ ​ဒါကြောင့်လဲဘဲ ​သြစတြေးလျ ​နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ​Bob ​Carr ​က ​တိုက်တွန်းနေတဲ့ ​အတိုင်း စစ်လက်နက်ရောင်းချမှုကလွဲလို့ ​မြန်မာနိုင်ငံ ​အပေါ် ​လုံးလုံးလျားလျား ​ဆန်ရှင်ဒဏ်ခတ်မှု ​တွေ ​ဖြစ်လာ ​နိုင်တယ်လို့ ​ပြောသွားပါ တယ်။
နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနေ့ ညစာစားပွဲတွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန် အမှူးပြုသော အစိုးရခေါင်းဆောင်များ၊ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီခေါင်း ဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင် များ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အ ပါအဝင် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များနှင့် အပစ်ရပ် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၏ ကိုယ်စားလှယ်များအပါ အဝင် လူမျိုးစု တိုင်းရင်းသား ခေါင်း ဆောင်များအား ပထမဆုံးအကြိမ် စုံညီစွာ မြင်တွေ့ရသည်မှာ နိုင်ငံ့အနာဂါတ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် များစွာ အားတက်ဖွယ်ဖြစ်ရသည်။
၆၆ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များမှ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ ၀န်ကြီးများ နှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မကြာမီ ကချင် ပြည် နယ်၌ ငြိမ်းချမ်းရေး ရောင်ခြည် သန်းလာတော့မည် ဖြစ်ပြီး ကေအိုင် အိုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိပါက ၁၉၄၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း မြန်မာ တနိုင်ငံလုံး၌ ပထမဆုံး အကြိမ် သေနတ်သံများ ရပ်စဲပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ရ ရှိပြီဟု သမိုင်းမှတ်တမ်း တင်နိုင်တော့မည်ဟု ပြောသည်။
အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၉ ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန် တွေ့ဆုံသည်နှင့် တပြိုင်နက်မှာပင် သမ္မတ၏ ငြိမ်း ချမ်းရေးကမ်းလှမ်းမှုအပေါ် သဘောတူညီ ကာ စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေး မှုဖြင့် ပဋိပက္ခများ အဖြေရှာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကေအိုင်အိုအဖွဲ့က ကြေ ညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်မှာလည်း မည်သည့်အခါမျှ မရရှိဖူးသေးသော တပြည်လုံးအတိုင်းအတာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရောင်နီ သန်း ပြီ ဟု မှတ်တမ်းတင်အပ်ပေသည်။
သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရချိန်ကတည်းက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည့် အမျိုးသားသွေးကွဲမှုနှင့် ပြည်တွင်းစစ်၏ အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်အပေါ် ခိုင်မာသော သန္နိဋ္ဌာန်ကင်းမဲ့ခြင်း၊ လူမျိုးစုံ အ ကြား တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရှိသည်ကို အသိအမှတ် မ ပြု မလိုက်နာ မကျင့်သုံးခြင်းတို့အပေါ် မှီတည်နေကြောင်း သိမြင်မှသာ လက်ရှိ ခံစားနေရသော ပြည်တွင်းစစ်၏ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကို ကု သ နိုင်ကာ အနာဂါတ်တွင် ရေရှည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထူထောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အတိတ်ကို ပြန်ကြည့်လျှင် ပြည်ထောင်စုနေ့ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များလွတ် လပ်ရေးကို အတူတကွ လက်တွဲ၍ လွတ်လပ်ရေး ရယူရန် ပင် လုံမြို့တွင် ညီလာခံပြုလုပ်ကာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗမာအပါ အဝင် တိုင်းရင်းသားအားလုံး အတူတကွ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် ပင်လုံစာချုပ်သည် ညီညွတ်မှုကို တန်းတူရေးအပေါ် အခြေပြုတည် ဆောက်ခဲ့ ခြင်း ကို ပြသသည့် ပြယုဂ်တခုပင်။
ယနေ့ကာလ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တည်ဆောက် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကတိကဝတ်ပြုကာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို စတင်လုပ်ဆောင်နေသော ဦးသိန်းစိန်၏ ဗဟို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ သည် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကို လူမျိုးစုံ တိုင်းရင်းသား အားလုံးနှင့် တသ ဘောတည်း လက်ရည်တပြင်တည်း တည်ဆောက်လိုလျှင် ပင်လုံကဲ့သို့ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်တို့အပေါ် တိုင်းရင်းသား အားလုံး သဘောတူ လက်ခံမည့် အာမခံချက်ကို ဖော်ဆောင်ရမည်။ ထိုမှတဆင့် ဒီမိုကရေစီ ကျင့်ထုံးများပေါ်တွင် အခြေပြုသည့် ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည် နယ်/တိုင်းများအကြား အာဏာခွဲဝေ ကျင့်သုံးခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။
လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက်ပိုင်း၌ မှ စတင်ခဲ့သော အမျိုးသားသွေးကွဲမှုနှင့် ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် အရှည်ကြာဆုံးသော မြန်မာ့ ပြည်တွင်းစစ်ကို ချုပ် ငြိမ်းရပ်တန့်ရေး ၆၆ နှစ်ပြည့် ပြည်ထောင်စုနေ့မှ စတင်ကာ သမ္မ တ အပါအဝင် အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်နှင့် တိုင်းရင်းသားအားလုံးညီ ညွတ် စွာ ကြိုးပမ်းနေကြပြီဟု ဧရာဝတီက ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မျှော်လင့်ချက် ခွန်အားများ ရှိနေသည်ကို ကမ္ဘာက လည်း အသိအမှတ်ပြု အားပေးထောက်ခံနေကြပြီ မဟုတ်လော။
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်နှင့် မောင်တော ဒေသတို့ရှိ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်၌ အလူမီနီယမ်နှင့် တိုက်တေနီယမ် ဓာတ်သတ္တု များ ကို တရုတ်ကုမ္ပဏီတခုက ထုတ်လုပ်ဝယ်ယူခွင့် ရရှိသွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ ရွှေရှာဖွေရေး အမည်ရှိ “Gold Finder” ကုမ္ပဏီသည် ပြီးခဲ့သည့်ရက် အနည်းငယ်က ရသေ့တောင် ဒေသသို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ် ကြောင်း၊ တူးဖော်စမ်း သပ်မည့် ကိစ္စများကို ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း စတင်လုပ်ဆောင်မည်ဟု သိရကြောင်း ရသေ့တောင်ဒေသခံ ဦးကိုကို မောင် က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအနေဖြင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီအား တူးဖော်စမ်းသပ် လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုထားသော်လည်း ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် တရားဝင် စာချုပ် ချုပ် ဆိုခြင်း မလုပ်ရသေးကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ သတ္တုတွင်း ၀န်ကြီး ဦးအောင်သန်းတင်က ဆိုသည်။
“ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ ညှိနိုင်းပြီးတော့ ဒေသခံတွေရဲ့ သဘောထားအတိုင်း လုပ်ဆောင်ဖို့ ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူတွေကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က လမ်းညွှန်ထားတာတော့ ရှိတယ်။ ဒေသခံတွေနဲ့ အဆင်ပြေပြီ ဆိုရင်တော့ ပြည်နယ်အစိုးရ အနေနဲ့လည်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်” ဟု ၀န်ကြီး ဦးအောင်သန်းတင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဒေသခံများက ပြောဆိုရာတွင် တရုတ်ကုမ္ပဏီသည် ယခင်ကလည်း သတ္တုစမ်းသပ်မှု လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုလည်း ပြည်ထောင်စု အစိုး ရ၏ ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားသည်ဟု ပြောဆိုကာ ဒေသခံတိုင်း ရင်းသား များနှင့် ဆွေးနွေးမှု မရှိဘဲ ၎င်းတို့စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ မြန်ဆန်စွာ အ ကောင်အထည် ဖော်ရေးကိုသာ လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု ဒေသခံများက ဆိုသည်။
“ဒီဒေသတွေက သယံဇာတတွေကို အကုန်ယူပြီးတော့ သူတို့ အကျိုးစီးပွားတခု အတွက်ပဲ လုပ်မယ်၊ ဒေသခံရွာတွေ မီးလင်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စတွေ စိတ်မ၀င်စားဘဲ သူတို့အကျိုးကိုပဲ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်သူတွေ အားလုံးက စုပေါင်းပြီးတော့ စီမံကိန်း ဆက်မလုပ်ဖို့ ကန့်ကွက် ရမှာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
တိုက်တေနီယမ် ဓာတ်သတ္တု ထုတ်လုပ်ရေး ကိစ္စကို ရခိုင်လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများကလည်း စောင့်ကြည့်နေကြောင်း၊ ပြည်နယ်အစိုးရသည် ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိကြောင်း၊ စီမံကိန်းအား ဒေသခံများက ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြမည်ကို စိုးရိမ်၍ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် ပြီး ရှင်းလင်း ပြောဆိုမှု တစုံတရာ မရှိသေးကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သူ ဒေါ်မညိုအေးက ဧရာဝတီသို့ ပြော သည်။
“ရခိုင်ပြည်ထဲမှာ လုပ်နေတဲ့ စီမံကိန်းတွေကို ကျမတို့က လေ့လာစောင့်ကြည့်နေပါတယ်၊ အများပြည်သူ အတွက် အကျိုးမရှိတဲ့ စီမံကိန်း အား လုံးကို ကန့်ကွက်သွားမှာပါ၊ ပြည် နယ်အစိုးရ အနေနဲ့လည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိဖို့အများကြီး လိုပါသေးတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့၏ ၀န်ကြီး ဦးအောင်သန်းတင်ကမူ ၎င်းတို့အနေဖြင့် စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများကို ဖုံးကွယ်သွားမည် မ ဟုတ် ဟု ပြောကြားသည်။
တိုက်တေနီယမ် သတ္တုရှာဖွေရေးအတွက် ရသေ့တောင်ဒေသ၌ လုပ်ကွက် ၅ ခုနှင့် မောင်တော မြို့နယ်တွင် လုပ်ကွက် ၂ ခုဖြင့်တူးဖော်ထုတ် လုပ်လိမ့်မည်ဟု သိရကြောင်း ဒေသခံ ဦးကိုကိုမောင်က ပြော သည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရသည် တရုတ်ကုမ္ပဏီအား စမ်းသပ်ထုတ်လုပ် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပေးထားပြီး၊ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ပဋိပက္ခ မဖြစ်ပွားရေး၊ ဒေခံများ ထိခိုက်နစ်နာမှု မရှိစေရေးနှင့် လယ်မြေ အဓမ္မသိမ်းမှုကိစ္စများ မလုပ်ဆောင်ရေးတို့ကို လမ်းညွှန်၍ လုပ် ဆောင် ခွင့် ပေးထားကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီများသည် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်၌ သဲတူးဖော်ခြင်းကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်လည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ ပင် လယ်ပြင်၌ ၆ ပေအနက်ရှိသော ကျင်းများတူး၍ သဲတန်ချိန် ထောင် ပေါင်းများ စွာထုတ်ယူခဲ့သောကြောင့် ကမ်းရိုတန်းတလျှောက် ကမ်းပါး များ ပျက်စီးခြင်း၊ ကမ်းပါးပြိုခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားကာ ရွှံ့နွံ့ထူထပ်၍ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုများရှိကြောင်း ဒေသခံများက ပြော သည်။
ရိုဟင်ဂျာ လှေစီးပြေးဒုက္ခသည် ၁၂၁ ယောက်ကို အင်ဒိုနီးရှား ကယ်တင်
မြန်မာနိုင်ငံကနေ ​လှေနဲ့ ​ထွက်ပြေးလာတဲ့ ​ရိုဟင်ဂျာ ​၁၂၁ ​ယောက်ကို ​အင်ဒိုနီးရှား ​တံငါသည်တွေက ​ကယ်တင်ထားတယ်လို့ ​အင်ဒိုနီးရှား ​အာဏာပိုင်က ​တရားဝင် ​ပြောလိုက်ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမရောက်ခင် ​ထိုင်းနိုင်ငံ ​ရေပိုင်နက်အတွင်း ​သေနတ်နဲ့ ​ပစ်ခတ်ခံခဲ့ ​ရတယ်လို့လည်း ​လှေပေါ်ပါလာတဲ့ ​ရိုဟင်ဂျာတွေက ​ပြော ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေ ​လိုက်ပါလာတဲ့ ​လှေဟာ ​အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ​ဆူးမားတြားကျွန်း ​မြောက်ပိုင်း ​အာချေးဒေသရှိ ​Cot ​Trueng ​ရွာအနားမှာ ​မျောနေ တာကို ​တံငါသည်တွေက ​တွေ့ရှိပြီး ​ကယ်တင်လိုက်တာ ​ဖြစ်တယ်လို့ ​ရွာ ​သူ ​ကြီး ​က ​အေဖက်ပီသတင်းကို ​ပြောပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ​မြန်မာနိုင်ငံကနေ ​ထိုင်းနိုင်ငံကို ​သွားရောက်ဖို့ ​စီစဉ်ပြီး ​ထိုင်းနိုင်ငံရေပိုင်နက်ထဲ ​အရောက်မှာ ​ထိုးအာဏာပိုင်တွေကလှေ ပေါ် တက်လာပြီး ​အစားအသောက်တွေ၊ ​လောင်စာတွေကို ​လှေ ပေါ်ကနေ ​ရေထဲပစ်ချ ​လိုက်တဲ့အကြောင်း ​အဲဒီနောက် ​လှေကို ​ပင်လယ် ထဲ ​ပြန်တွန်းပို့လိုက်ပြီး ​ညအချိန် ​ရောက်တဲ့အခါ ​သေနတ်နဲ့ ​ပစ်ခတ်တာတွေ ​လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ​လှေပေါ်ပါလာသူ ​Farid ​Alam ​က ​မလေး ဘာသာနဲ့ ​ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလှေပေါ်က ​လူ ​၁၂ ​ယောက်လည်း ​ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက် ​ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ ​ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ​သေဆုံးသွားပြီလို့ယူဆကြောင်း လည်း ​ပြောပါတယ်။
သူတို့အနေနဲ့ ​မူဆလင်ဘာသာဝင်တွေရှိတဲ့ ​ဘယ်နိုင်ငံမှာ ​မဆို ​နေလိုတဲ့အကြောင်း ​အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ​အာချေးဒေသမှာ ​နေရမယ်ဆိုရင်လည်း ​နေထိုင်မယ့်အကြောင်း ​သူတို့ကိုတော့ ​မြန်မာနိုင်ငံကို ​ပြန်မပို့ဖို့ ​တောင်းပန်ကြောင်းတွေကို ​ပြောခဲ့ပါတယ်။ ​မြန်မာနိုင်ငံကို ​ပြန်ပို့မယ့်အစား ​သူ တို့ကိုသာ ​ပစ်သတ်ဖို့ ​လည်း ​ပြောလိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ​ပဋိပက္ခတွေ ​ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် ​အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကို ​ထွက်ပြေးလာတဲ့ ​ဒုက္ခသည်တွေပိုများလာပြီး ​အများစုက ​အင်ဒိုနီးရှား၊ ​မ လေးရှားနဲ့ ​ထိုင်းနိုင်ငံကို ​သွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ​အောက်တိုဘာလကစပြီး ​ထိုင်းနိုင်ငံကို ​ဝင်ရောက်လာတဲ့ ​ရိုဟင်ဂျာအယောက် ​၆၀၀၀ ​ရှိပြီလို့ ​ထိုင်းစစ်တပ်ကလည်း ​ဒီလအစော ပိုင်း က ​ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၉ ​ခုနှစ်တုန်းကလည်း ​ခိုလှုံခွင့်တောင်းဖို့ ​ရောက်လာတဲ့ ​ရိုဟင်ဂျာလှေတစ်စီးကို ​ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ​ပင်လယ်ထဲ ​ပြန်လည်တွန်းပို့ခဲ့ တာကိုလည်း ​ထိုင်းအစိုးရက ​ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီနှင့် မြန်မာအစိုးရတပ်မတော်အကြား ယခုအပတ်အတွင်းဖြစ်ပွါးခဲ့သောတိုက်ပွဲမှ သိမ်းဆည်းရမိ သော လက်နက်ပစ္စည်းများအား အစိုးရဘက်မှ ပြန်လိုချင်ပါက ပြန် လည်ပေးအပ်မည့်အစီအစဉ်ရှိကြောင်း သျှမ်းပြည်တပ်မတော်ကပြော ပါသည်။
“ ၂၄ ရက်နေ့က အစိုးရ ဗမာ့တပ်မတော်က ကြိုတင်အကြောင်းမကြားဘဲ ကျနော်တို့ နယ်မြေထဲဝင်လာတယ်။ အဲဒီတော့ တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ သေ နတ် ၆ လက်နဲ့ ပစ္စတို ၂ လက် စကားပြောစက် ၁ လုံး ကျနော်တို့သိမ်းဆည်းရမိတယ်။ သူတို့ပြန်လို ချင်ရင် ပြန်ပေးအပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိ ပါတယ်။ သမ္မတကြီးဆီကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပစ္စည်းရလိုရင်ပြန်လို ကြောင်း စာရေးထားပါတယ်” ဟု သျှမ်းပြည်တပ်မတော်မှ ပြောခွင့်ရ စိုင်းဆိုင်မိဏ်း ကပြောပါသည်။
ယခုအပတ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ခွဲခန့်ကနေ ၃ နာရီခွဲခန့်အထိ သျှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီ RCSS/SSA နှင့် မြန်မာအစိုးရတပ်မတော် ခလရ ၆၆ ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွါးရာ မြန် မာ့တပ်မတော်ဘက်မှ စစ်ကြောင်းမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်မြင့်ထွန်း အပါအ ဝင် ၅ ယောက်ကျဆုံးကြောင်း၊ သေဆုံးသူများထံမှ သေနတ်မျိုးစုံ ၈ လက် နှင့် စစ်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရမိကြောင်း ရှေ့တန်းရောက် တပ် မှူးတ ဦးက အတည်ပြုပါသည်။
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ရလခ အခြေစိုက်ရာ ခိုလမ်မြို့နယ်ခွဲရှိ ခလရ ၆၆ လက်အောက် ခံစစ်ကြောင်းနှင့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် တပ်မဟာ ၃၇၆ လက်အောက်ခံ တပ်ခွဲ တခုတို့ ခိုလမ်(မြို့နယ်ခွဲ) အရှေ့တောင် ဘက် မိုင် ၂၀ ခန့်ရှိ ခိုအွတ်ကျေး ရွာ အုပ်စုဝင် နားလောရွာအနီး၌ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွါးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ၏ သဘောတူညီမှုကိုမလိုက်နာဘဲ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် ထိန်းချုပ်လှုပ်ရှားရာ ကျေးလက်တော ရွာထဲသို့ မြန်မာ့တပ်မတော်က အကြောင်းမကြားဘဲဝင်ရောက်လာသဖြင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တိုက် ပွဲဖြစ်ပွါးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သျှမ်းပြည်တပ်မ တော်က စွပ်စွဲပါသည်။
ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့၌ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ် ဦးဆောင်သော သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSAအဖွဲ့အားဦးအောင် မင်းဦးဆောင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် ရှေ့ဆက် အပစ်ရပ်တပ်ဖွဲ့နှင့်မြန်မာ့တပ်မတော် အကြား ပစ်ခတ်မှုအလားအလာမရှိတော့ကြောင်း၊ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့်အစိုးရတို့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီးဖြစ်ကြောင်း ဦးအောင်မင်းက ပြော ကြားခဲ့ပါသည်။
နေပြည်တော် တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများတွင် အစိုးရအသုံးစရိတ်အဖြစ် ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၇၈ ဘီလီယံအထိ သုံးရန် စီစဉ်ထားသော ကြောင့် အသုံးစရိတ် တောင်းခံသည့် နေပြည်တော်ကောင်စီကို ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှုများ ရှိနေ သည်။
“နေပြည်တော်ကောင်စီရဲ့ အသုံးစရိတ်တွေက အရမ်းများလွန်း နေတယ်။ အထူးသဖြင့် လမ်းတလမ်းဖောက်ရင် မိုင် ၂၀၀န်းကျင် လောက် ရှိတဲ့ လမ်းတလမ်းကိုတောင် ကျပ် ၂၅ ဘီလီယံအထိ သုံးထားတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့မန္တလေး နဲ့ မြစ်ကြီးနားလမ်းအတွက် သုံးစွဲထားတာက ကျပ်သန်း ၂ ထောင်၊ ၂ ဘီလီယံပဲ ရှိတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ အများဆုံး အသုံး ပြုထားတဲ့ ရန်ကုန် – မော်လမြိုင် – ထားဝယ် – ဘိတ် လမ်းဟာ ၅ ဘီလီယံပဲ ရှိတယ်။ နေပြည်တော်မှာ အနိမ့်ဆုံး ၃ မိုင်လောက်ရှိတဲ့ လမ်း ကိုတောင် သန်း ၁၀၀၀၊ ၁၅၀၀၀ လောက်ဆိုတော့ ၁ ဘီလီယံ ကျော်နေတယ်” ဟု လွှတ်တော်တွင် နေပြည်တော်ကောင်စီကို ဝေဖန် ဆွေး နွေးခဲ့သူ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းသူက ပြောသည်။
နေပြည်တော် တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းအတွက် အသုံးပြုငွေသည် ၀န်ကြီးဋ္ဌာနများ၏ စီမံကိန်း တင်ပြမှုများတွင် အဆင့် ၁၁ ရှိကြောင်း၊ တ နိုင်ငံလုံး၏ ကျန်းမာရေး ဘတ်ဂျက်ပင်လျှင် အဆင့် ၁၀ သာရှိကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ် တော် အမတ်က ဆိုသည်။
ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှု မညီမျှသည့်အတွက် လူထုတွင် အနုတ်လက္ခဏာပြသည့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး သက်ရောက်မှုများ ရှိလာနိုင်ကြောင်း၊ လိုငွေ များလာလျှင် အစိုးရက ငွေစက္ကူများ ရိုက်နှိပ် သုံးစွဲရသောကြောင့် ငွေကြေး ဖောင်းပွမှုများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံဝင်ငွေ အများဆုံးရရှိသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရောင်းရငွေများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံအတွက် တခြားလိုအပ်သော ကိစ္စရပ်များ တွင် အသုံးမပြု နိုင်တော့ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်မှ အကြံပေးအရာရှိ ဦးခိုင်ထွန်းကလည်း သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
“တကယ် လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ မသုံးဘူး၊ ဒီလို စီမံကိန်းမျိုးက Return ပြန်မလာဘူးလေ။ ဒီဟာအစား စက်ရုံတရုံ ဆောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကုန် ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်၊ ထုတ်ကုန် ပြည်ပတင်ပို့နိုင်ရင် အဲဒီအပေါ်မှာ အကျိုးအမြတ် ရလာမယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
နေပြည်တော် တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းသည် တိုက်ရိုက်အကျိုးအမြတ် မရှိကြောင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံကသာ ရေရှည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင် စစ်အစိုးရတည်ဆောက်ခဲ့သော နေပြည်တော် စီမံကိန်း သည် စာရင်း အင်း မရှိရုံမက နိုင်ငံ၏ မည်သည့်ကဏ္ဍမှ ရရှိသည့် ငွေကြေးဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည်ကိုလည်း မသိရှိရသေးကြောင်း ဟု ဦးခိုင်ထွန်းက ဆက်ပြောသည်။
“အရင်အစိုးရက လုပ်သွားတဲ့ ပုံစံက အခုထက် ပိုဆိုးတယ်။ ဘာစာရင်းအင်းမှ မပြဘဲနဲ့ လူတယောက်က လက်ညှိုးထိုး ခိုင်းတာကို လုပ်ခဲ့ရ တာ။ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မရှိတဲ့ ဘတ်ဂျက်ဝမ်း၊ ဘတ်ဂျက်တူး ဆိုတာမျိုးနဲ့ဆောက်ခဲ့တာ။ နေပြည်တော် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း ဘက်ဂျက် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ လုပ်သွားတာ။ နောက်ပြီးတော့ ဘတ်ဂျက်ရဲ့ ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်းလို့ ပြောရခက် တယ်။ အရင်အစိုးရက ပုံမှန် ဘတ်ဂျက်ထဲက သုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး” ဟု ဦးခိုင်ထွန်းက ဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စု အစိုးရက နေပြည်တော်ကို ကျပ်သိန်းပေါင်း ထောင်သောင်းချီ အကုန်ခံ၍ တည်ဆောက် နေသော်လည်း တိုင်းရင်းသားဒေ သ များတွင် ကတ္တရာလမ်းကောင်းကောင်းပင် မရှိကြောင်း ရခိုင်ပြည် နယ်စစ်တွေမြို့မှ ရှေ့နေကြီး ဦးသန်းထွန်းက ပြောသည်။
“ဒီနှစ်မှ ရန်ကုန် – စစ်တွေ လမ်းမကြီးကို နည်းနည်း ပြန်ပြင်ပေးတာ။ အရင်တုန်းကတော့ ရန်ကုန် – စစ်တွေလမ်းမကြီးက ကားလမ်းလို့သာ ခေါ်ရတာ လှည်းကြမ်းလမ်း အဆင့်တောင် မရှိပါဘူး။ မိုးရာသီဆိုရင် ဗွတ်ထပြီ။ နွေရာသီဆိုရင် ဖုတ်တွေလူးပေါ့။ နာမည်ကသာ ကတ္တရာ လမ်း မကြီးလို့ ပြောတာ။ ကတ္တရာဆိုလို့ ဘာမှ မကျန်တော့ဘူး။ ဘယ်လောက်အထိအခြေအ နေ ဆိုးသွားခဲ့လဲဆိုတော့ စစ်တွေကနေမြောက် ဦးကို အရင်က သဘောင်္လိုင်းတွေနဲ့ သွားကြတယ်။ကားလမ်း ပေါ်လာတော့ ကားတွေနဲ့ သွားကြတယ်။ လမ်းဆိုးလွန်းလို့ မခံနိုင်တော့တဲ့အ တွက် အခုဆိုရင် စစ်တွေ ကနေ မြောက်ဦးကို သဘောင်္နဲ့ပဲ ပြန်သွားနေကြပြီ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ကားလမ်း ဖောက်လုပ် ပေးခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းလမ်းပြင်ဆင်မှု လာရောက် ပြုလုပ်ပေးခြင်းမှာ အလွန်နည်းပါးကြောင်း၊ မြောက်ဦး – စစ်တွေလမ်းမှာ မိုင်တရာခန့်ရှိပြီး တနာရီလျှင် မိုင် ၂၀ ခန့်သာ မောင်း နိုင် ကြောင်း၊ စစ်တွေမြို့မှ နံနက် ၇ နာရီခန့် ကားထွက်လျှင် မြောက် ဦးသို ၁၂ နာရီကျော်မှသာ ရောက်ရှိကြောင်း ဦးသန်းထွန်းက ပြောသည်။
သို့ရာတွင် နေပြည်တော် ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကြောင့် ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တိုးတက်လာပြီး ၂၀၀၄ – ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၉ – ၂၀၁၀ နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ တိုင်းပြည်၏ ဆင်းရဲမွဲတေမှုမှာ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ကျ သွားခြင်းသည် နေပြည် တော် ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းတွင် အလုပ်ကိုင်ရရှိလာမူများနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်လျှက် ရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်၏ ဆင်း ရဲမွဲတေမှု စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားကြောင်း ဦးခိုင်ထွန်းက ပြောသည်။
၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းတွင် နေပြည်တော် ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်း ၂၀ ခုအတွက် လျာထားငွေ ကျပ်သန်း ပေါင်း ၁၇၈၃၀၀ ဒဿမ ၄၈၀ အား ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း အ ကြား လျှော့ချ၍ ပိုထွက်လာသော ငွေများကို တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ပြည်နယ်များတွင် လိုအပ်သော နေရာများ၌ လျာထား အသုံးပြုရန်အတွက် အမျိုးသား စီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းအား ပြန်လည် ရေးဆွဲတင်ပြရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရကို တိုက်တွန်း ပြောဆိုမှုများရှိကြောင်း သိရသည်။
နော်ဝေးသံယံဇာတထိန်းသိမ်းမှုကို သင်ယူချင်လို့ ဦးသိန်းစိန်ပြော
ဥရောပတိုက် ​၁ဝ ​ရက်ကြာခရီးစဉ်အတွင်း ​အခုနော်ဝေးနိုင်ငံကို ​ရောက်ရှိနေတဲ့ ​မြန်မာနိုင်ငံတော် ​သမ္မတ ​ဦးသိန်းစိန်က ​မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ​နော်ဝေးနိုင်ငံလို ​သံယံဇာတ ပေါကြွယ်တဲ့ ​နိုင်ငံက ​တိုင်းသူပြည်သား ​တွေအကျိုးအတွက် ​ဘယ်လို ​ထိန်းသိမ်းသလဲဆိုတဲ့ ​နည်းနာတွေကို ​သင် ယူလိုတယ်လို့ ​နော်ဝေး ​ဝန်ကြီး ​ချုပ် ​Jens ​Stoltenberg ​နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက် ​ပြောသွားပါ တယ်။
သမ္မတ ​ဦးသိန်းစိန်က ​မြန်မာနဲ့နော်ဝေး ​၂ ​နိုင်ငံ ​ပူးပေါင်းကူညီ ​လုပ်ဆောင်မှုတွေ ​ပိုမို ​ဖြစ်လာစေလိုတဲ့ ​အကြောင်း ​ပြောသလို ​ နော်ဝေး ​ဝန် ကြီး ​ချုပ် ​Jens ​Stoltenberg ​ကလည်း ​ပြီးခဲ့တဲ့ ​နှစ်ပိုင်းတွေ ​အတော အတွင်း ​မြန်မာနိုင်ငံမှာ ​ဒီမိုရေစီ ​ပြောင်းလဲရေးမျိုး ​လောက်မြန်ဆန်တဲ့ ​အပြောင်းအလဲတွေ ​မကြုံခဲ့ ​ဘူးသေးဘူးလို့ ​တုန့်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ ​သိရပါတယ်။
နော်ဝေး ​နိုင်ငံက ​မြန်မာနိုင်ငံမှာ ​သံတမန် ​အဆင့်တွေကို ​တိုးချဲ့ချထားမယ်လို့လည်း ​ပြောသွားပါတယ်။ ​သမ္မတက ​မနေ့ညနေက ​ နော်ဝေးမှာ ​အခြေချနေထိုင်တဲ့ ​မြန်မာတိုင်းရင်းသား ​မိသားစုများနဲ့ ​တနာရီ ခွဲကြာ ​တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ​လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ ​ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ​လုပ်ငန်းစဉ် ​တွေအကြောင်း ​အနာဂတ် ​မျှော်မှန်းချက်များ ​အကြောင်း ​အပါအဝင် ​မြန်မာပြည်ဖွားတွေကိုလဲ ​ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမှာ ​ပါဝင် ကြဖို့ ​ဖိတ် ခေါ် ခဲ့ပြီး ​မေးလာတဲ့ ​မေးခွန်းတွေကိုလည်း ​ပြန်လည် ​ဖြေကြားပေးခဲ့တယ်လို့လဲ ​သိရပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ​ဆက်လက်ပြီး ​Finland, ​Austria, ​Belgium ​နဲ့ ​ Italy ​နိုင်ငံတွေ ​ကို ​ဝင်ရောက်လည်ပတ်ပြီး ​မတ်လ ​၈ ​ရက်နေ့မှာ ​မြန်မာ နိုင် ငံကို ​ပြန်ရောက်မှာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို သမိုင်းမှာ စိတ်ဖိစီးမှု အများဆုံး လူ့အဖွဲ့အစည်းလို့ ဆိုရင် မမှားတန်ရာဟု ထင်သည်။ လူမှုရေး၊ စီးပွား ရေး၊ နိုင်ငံရေး အရေးကိစ္စ များ စွာပင် အပြည့်အ၀ အလိုကျ နှစ်ခြိုက်စ ရာ မရှိ။ စီးပွားရေးက မပြည့်စုံ၊ လူမှုရေးက မလုံခြုံ၊ စီးပွားရေးက ချို့တဲ့၊ (မြေထု၊ ရေထု၊ လေထု) ၀န်းကျင်က ညစ်ညမ်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ရာသီဥတုက ဖောက်ပြန်၊ အနာဂတ်က မတောက်ပ။
ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ဆိုတာက တော်သေးသည်။ လူတခု ပူမှုရယ်တဲ့ ဆယ်ကုဋေ ဆိုသော စကားရှိသည် မဟုတ်လား။ စိတ် ဖိစီးမှုက စိတ်ကျရောဂါ အဆင့်ကူးစက်သွားလျှင် မလွယ်။ လူထု လူတန်းစား ပေါင်းစုံ (ကျောင်းသား၊ အလုပ်သမား၊ လုပ်ငန်းရှင်၊ အနုပညာ သမား စသဖြင့်) သူ့အထွာနှင့်သူ ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ကြရသည်။ ဒါကြောင့် တိုးတက်သည် ဆိုသော အနောက်နိုင်ငံများတွင် စိတ်ရော ဂါကု ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ရတာကို အလေ့အထုံ ဖြစ်၍ နေသည်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာတော့ အရူးဟု အထင်ခံရမှာ စိုးသောစိတ်ဖြင့် စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်ထံ သွားလေ့မရှိ။
အခုတလော သတိထားမိတာက ဂျာနယ်တွေထဲမှာ အဆက်မပြတ် ပါလာတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတဲ့ အမှုအခင်းတွေပါ။ အိမ် အပေါ် ထပ်မှ ခုန်ချသူ၊ အဆိပ်သောက်သူ၊ ဆွဲကြိုးချသူ စသဖြင့် နည်းမျိုးစုံနဲ့ သေကြောင်းကြံကြတဲ့ သတင်းတွေ တွေ့ရသည်။ အတော်များများ ကလည်း အထမြောက်တာ တွေ့ရ၏။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် တနှစ်တည်းမှာပဲ အဆိပ် (ပိုးသတ်ဆေး) သောက်သေတဲ့သူ ၂၀၁ ယောက် ရှိတယ်လို့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အဆိပ်ကုဌာနက ဒေါက်တာရဲမြင့် ထုတ်ဖော်ပြောတာ ကြားလိုက်ရသည်။ ကြို့ပင်ကောက်က ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်း ပိုင်ရှင် လင်မယားဆို ကလေးကို သကြားလုံးထဲ အဆိပ်ထည့်ကြွေးပြီး သူတို့လည်း အဆိပ်သောက်သေကြသည်တဲ့။
မကြာမီက ဂျာနယ်တစောင်မှာပင် တာဝန်ရှိသူတဦးက ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတဲ့ အမှုတွေ များလာလို့ ပြဿနာ အ ရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေတားဆီးဖို့ အထိ ထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တာ ကြားလိုက်ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီကိစ္စဟာ ပေါ့သေးသေးပြဿနာမဟုတ် ပါဘူး။ လူ့အသက် တချောင်းကိစ္စလို့ ဆိုပေမယ့် အဲဒါဟာ တိုင်းပြည်အရေး၊ နိုင်ငံ့အရေးနဲ့လည်း ဆက်စပ်နေပါတယ်။ မကြာခင်က ဂျပန်က ထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်းအရ ၂၀၀၉ ခုနှစ် က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေမှုကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံ စီးပွားရေးဟာ ဒေါ်လာ ၃၂ ဘီလီယံကျော် ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒါဟာ ၀င်ငွေ ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ ကုသမှု ကုန်ကျစရိတ်ကို ထွက်ချက်ထားတာပါ။
ဥပမာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ဂျပန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတဲ့သူ ၂၆၅၀၀ ယောက်ရှိတယ်။ အသက် ၁၅ နှစ်နဲ့ ၆၅ နှစ် ကြားသူတွေပါ။ သူတို့သာ သက်တမ်းစေ့နေထိုင်ပြီး ပင်စင်မယူခင်အထိ အလုပ်လုပ်ကြ မယ်ဆိုရင် ယန်းငွေ ၁ ဒဿမ ၉ ထရီလီယံ အထိ ၀င်ငွေ ရလိမ့်မယ်လို့ ဆို ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အဖိုးတန်အင်အားတွေ ဆုံးရှုံးကြရတာပေါ့ ခင်ဗျာ။ ၂၀၀၀ ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတဲ့သူ ၃၂၀၀၀ ကျော် ရှိတယ်တဲ့။ အသက်ကို မနှမျောကြတဲ့ အထဲမှာတော့ အာရှသားတွေဟာ ထိပ်တန်းကပဲ လို့ ဆိုရပါမယ်။ ဂျပန်တွေက ဒါကို ဘူရှီဒို စိတ်ဓာတ်လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ဆာမူရိုင်း တွေဟာ သခင်အတွက် အသက် စွန့်ဖို့ ၀န်မလေးကြဘူး။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ပြီးဆုံးခါနီး ဂျပန်မှာ ခါမီကာဇေခေါ်တဲ့ အသေခံ လေသူရဲတွေ ပေါ်လာတယ်။ သူတို့က လေယာဉ်ပျံရော ကိုယ်တိုင်ပါ ပစ်မှတ်နေရာကို ထိုးစိုက်ချပြီး အသေခံ တိုက် ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေမှု အများဆုံးက ဂျပန်နိုင်ငံ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ကျနော်တို့ဆီက လူတွေ အင်မတန် အား ကျပြီး အစားအသောက်က အစ ၀တ်စားပုံ ဖက်ရှင်အဆုံး အတုခိုး နေတဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံပါ တဲ့။ ကျန်တာ အတုခိုးကြပါ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတာတော့ အတု မခိုးကြပါနဲ့လို့ တောင်းပန်ရတော့မှာပဲ။ ဘာဖြစ် လို့လဲ ဆိုတော့ မြန်မာကလည်း ဒီကိစ္စမှာ “ဇ”က မသေးဘူး ကိုး။ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက သာကေတ တံတားသစ်ကြီး ပေါ်လာတော့ အဲဒီ တံတားပေါ်က ခုန်ချသေတဲ့သူက မနည်းဘူး။ တချို့ သမီးရည်းစားတွေဆို လက်ချင်းတွဲချည်ပြီးတောင် ခုန်ချ သတ် သေကြတယ်။ ဘယ်လောက် ရူးမိုက်ကြသလဲ။ သူတို့က ဒီလို လက်ချင်းတွဲ ထားရင် နောင်ဘ၀ကျ ဒီလိုပဲ အတွဲလိုက် ၀င်စားကြမယ်လို့ တွေးပုံ ပေါ်တယ်။ သေရင် လူဟာ သူ့ (ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်) ကံ အ လျောက် ၃၁ ဘုံကို လားကြရတယ် ဆိုတာမှ မသိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ။ အဲဒါကြောင့် လာခုန်ချတဲ့ သူတွေကို တားဖို့ သာကေတ တံတားမှာ ရဲ အစောင့် တောင် ချထားခဲ့ရဖူးတယ်။
အဲဒါတွေဟာ ရှိတ်စပီးယားရဲ့ ရိုမီယို နဲ့ ဂျူးလီယက် ပြဇာတ်ကို အတုယူမှားရာက ဆင်းသက်လာတဲ့ အယူအဆလွဲတွေလို့ ထင်တာပဲ။ အဲဒီ ဇာတ်ထဲမှာ တော့ ချစ်သူနဲ့ ကွဲတဲ့အတွက် နှစ်ယောက်စလုံး ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေခဲ့ကြတယ်။ ကျောင်းသုံး အထက်တန်း စကားပြေစာ အုပ်ထဲမှာ သတင်းစာဆရာတို့ရဲ့ ဘိုးအေ ဘိုးဝဇီရရဲ့ စိန်စားသေတဲ့သတင်း ဖွဲဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ ရေးထားတာ ဖတ်ဖူး ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ခက် တာ က အသိဉာဏ်မရှိတဲ့သူတွေသာ ဒီအလုပ်မျိုး လုပ်ကြတယ်လို့ တထစ်ချ ပြောမရပြန်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာတွေဖြစ်တဲ့ ဗာဂျီးနီယားဝုဖ် (ရေထဲ ဆင်းသေ)၊ ဆယ်ဗီလာပလပ်ခ် နဲ့ က၀ါဘာတာ (ဓာတ်ငွေ့ရှူရှိုက်သေ)၊ ဟဲမင်းဝေး (သေနတ်နဲ့)၊ မီးရှီးဗား (ဓားနဲ့ ဗိုက်ကိုခွဲ) စတာတွေလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေခဲ့ကြလို့ပါပဲ။
ကျနော်တို့ လေးစားတဲ့ စာရေးဆရာမကြီး ဒေါ်ကြည်အေးရဲ့ ၀တ္ထု တပုဒ်ထဲမှာ “လူတွေဟာ အပျော်ရွှင်ဆုံး အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ် သေရမယ်၊ အဲဒါဟာ ဘ၀ကို အနိုင်နဲ့ ပိုင်တာပဲ” လို့ ဆိုတဲ့စကား ကြားလိုက်ရတော့ ရုတ်တရက် လန့်သွားဖူးပါတယ်။ ဆန်းသစ်တယ်၊ သူများနဲ့ မတူဘူး ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တိုင်းကိုလည်း ကောင်းလှချည့်ရဲ့လို့ ပြောမရပါဘူး။ လူ့ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်း အသိဉာဏ် တရားတွေနဲ့ထိန်းညှိ ရပါမယ်။ ရှေး အဆက်ဆက်က စာပေပါရမီရှင်တွေ ဒီလို သတ်သေကြတယ် ဆိုတာလည်း စိတ်စံလွဲနေတဲ့ ချို့ယွင်းချက်ကြောင့် ပါပဲ။ သက် သက် သာသာ ပြောရရင်တော့ ယဉ်ယဉ်ကလေး ရူးနေကြ တာပေါ့။
ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ တောင်ကိုးရီးယား နိုင်ငံမှာဆို နေ့စဉ် သတ်သေတဲ့လူ ၃၀ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တွေ သိတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးတွေ၊ အဆိုတော်တွေလည်း ပါပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီသတင်း တွေက ပိုပြီး အာရုံစိုက်စရာ ဖြစ်ရုံမကဘူး၊ နောက်ထပ် သေ ချင်တဲ့ သူတွေကိုပါ အားပေး လှုံ့ဆော်သလို ဖြစ်တော့တာ ပေါ့။ ဖျော်ဖြေရေး နယ်ထဲက လူတွေတင် မကဘူး၊ စီးပွားရေးလောက အားက စား လော က နိုင်ငံရေးလောက က လူတွေလည်း ပါတယ်။ သမ္မတဟောင်း တယောက်တောင် ပါသေးတယ်။
တကယ်တော့ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေထဲမှာ အဆင့် ၁၃ ချိတ်တဲ့ နိုင်ငံပါ။ သာမန်ကြည့်ရင် တော့ တိုင်းပြည်ဟာ ကြွယ်ဝတယ်လို့ ထင်စရာရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး တိုင်းပြည်တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း စားဝတ်နေရေး စရိတ်က ကြီးမြင့်တယ်။ လူတန်းစေ့နေနိုင်အောင် မနည်းရုန်းကန်နေကြရတယ်။ အပြိုင်အဆိုင် အားကြီးတယ်။ (အနုပညာရှင်တွေ သတ်သေကြရာမှာတော့ အဲဒီအ ချက်က အဓိက ကျတယ်။) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှု (Stress) ဒဏ် မခံနိုင်ကြဘူး။ ဒီတော့ ဆိုးဝါးတဲ့ စိတ်ကျရောဂါ (Depression) ဖြစ်လာ ကြ တယ်။ ဒီရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတရပ်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် သတ်သေကြခြင်းပါပဲ။
တကယ်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေဖို့ ကြံတဲ့သူကို အပြစ်ရှိတယ်လို့ ဥပဒေက သတ်မှတ်တယ်။ အိန္ဒိယ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ အရပြော တာပါ။ ဒါက အင်္ဂလိပ်ရဲ့ ဥပဒေကိုး။ သူတို့ ဘာသာမှာ လူကို ဘု ရားသခင်က ဖန်ဆင်း တယ်။ လူရဲ့ သေခြင်း ရှင်ခြင်းဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတာဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်ကို ဆန့်ကျင်တာပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အပြစ် ရှိတယ်။ ကျနော် တို့ ဘာသာကတော့ ဒီလို သတ်သေရင် နောက်နောင် ဘ၀ ဘ၀တွေမှာလဲ အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာတိုင်အောင် အထုံပါတတ်တယ်လို့ ခြောက်လှန့် တားမြစ်ထား ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေကြတာ ဆိုရင်လည်း နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းနဲ့ ကြည့်ရင်တော့ အင်မတန် နည်းပါ သေးတယ်။ နောက် တချက်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ပီပီ လောကဓံတရား ရှစ်ပါးနဲ့ ကြုံတဲ့ အခါ အထိုက်အလျောက် တရားနဲ့ ဖြေနိုင်ကြလို့ပါပဲ။
အခက်အခဲ ဆိုတာ ဘ၀မှာ ကျနော်တို့ရဲ့ စွမ်းရည်ကို စိန်ခေါ်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေလို့ပဲ မှတ်ယူရပါမယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ဆုံးရှုံး ဆုံးရှုံး အသက် မ ဆုံးရှုံးသေးရင် ဆုံးရှုံးတယ်လို့ မခေါ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေကြမယ် ကြံရင် ဆင်ခြင်ဉာဏ် သုံးပြီး တွေးတွေးဆဆ ဆုံးဖြတ်တတ်ကြပါစေ။
(သစ္စာနီသည် ကဗျာ၊ ၀တ္ထုတို၊ ဆောင်းပါး၊ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ သရော်စာ၊ ဘာသာပြန်၊ သိပ္ပံဝတ္ထု၊ အနုပညာ ဝေဖန်ရေး စသည့် စာပေ လက်ရာစုံကို မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်များတွင် ရေးသားလျက် ရှိပြီး လုံးချင်း စာအုပ်များစွာကိုလည်း ရေးသားထုတ်ဝေလျက်ရှိသည့် စာရေးဆရာ တ ဦးဖြစ်သည်။)
( 48 )နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ လိုင်ဇာရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများကို သွားရောက်
( 47 )Policeman dies, 42 injured in Myanmar land grab clash
( 46 )အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်တွင် ပိုင်ရှင်မဲ့ ဘိန်းခင်းများ ဖျက်ဆီး
( 45 )Myanmar murderers to face lethal injection in China
( 44 )အစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက် ကေအိုင်အိုက ပြည်သူ့သဘောထားရယူ
( 43 )US Business Faces Confused Signals from Washington on Burma
( 42 )မန္တလေး သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဆောက်မည်
( 41 )USAID chief Raj Shah to travel to India, Myanmar
( 40 )နော်ဝေနိုင်ငံကို အတုယူပြီး ကြိုးပမ်းရန် သမ္မတ ပြောကြား
( 39 )Mekong River murderers to be executed on March 1st
( 38 )မအူပင်က လယ်သမားဆန္ဒပြ ဖြိုခွင်းမှု ၁ ဦးသေ၊ ၇၀ ခန့် ဒဏ်ရာရ
( 37 )AIA plans to open office in Myanmar
( 36 )ကမ္ဘာ့ဘဏ် အကူအညီ လက်ခံရမယ့် မြို့နယ်တွေ ရွေးချယ်
( 35 )Opportunity for sustainable growth in Myanmar
( 34 )မန္တလေး သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဆောက်မည်
( 33 )Policeman killed, scores hurt in Myanmar clash
( 32 )ကမ္ဘာ့ဘဏ် အကူအညီ လက်ခံရမယ့် မြို့နယ်တွေ ရွေးချယ်
( 31 )Govt bans four Myanmar packaged edible items
( 30 )နံ့သာကုန်းဈေး မီးလောင်မှု အကြောင်းရင်း အတည်မပြုနိုင်သေး
( 29 )Boom in Myanmar aids Asean
( 28 )လွတ်လပ်မှုရဖို့ ညီညွှတ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ဒက်စ်မွန်တူးတူး ပြောကြား
( 27 )121 asylum seekers rescued
( 26 )ICRC လိုင်ဇာဆေးရုံနှင့် ဒုက္ခသည်များကို သွားရောက် ကူညီ
( 25 )The Rohingya of Burma are on the edge of disaster. Why won't the world act?
( 24 )နော်ဝေရောက် မြန်မာမိသားစုတွေ နဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တွေ့ဆုံမည်
( 23 )Rohingya claim Thais shot at them
( 22 )လယ်သမားတွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကြား အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရသူများရှိ
( 21 )Mekong River murderers to be executed
( 20 )မိုးရေးမြို့ မီး မြန်မာ့မီးသတ် သွားရောက် ကူညီငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရ
( 19 )Chinese medical team provides free treatment in Myanmar
( 18 )နော်ဝေနိုင်ငံကို အတုယူပြီး ကြိုးပမ်းရန် သမ္မတ ပြောကြား
( 17 )Political Prisoners in Mandalay Claim Mistreatment
( 16 )ICRC လိုင်ဇာဆေးရုံနှင့် ဒုက္ခသည်များကို သွားရောက် ကူညီ
( 15 )Ethnic Groups to Begin Search for Japanese War Dead
( 14 )နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် နှစ်ဦး ရန်ကုန်တွင် တွေ့ဆုံ
( 13 )China Military Further Tightens Burma Border Control
( 12 )အင်းလေး ဟိုတယ်ဇုန် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်၍ တရားစွဲခံရသူများ သိန်း ၇၀ အာမခံ ထားရ
( 11 )121 Rohingyas found adrift off Aceh coast
( 10 )သာကေတ မာန်ပြေတွင် အခြေအနေ ပြန်လည်တည်ငြိမ်
(9)Land seizure protests turn deadly in Delta
( 8 )အသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာ ကရင်နီကျောင်းကို အစိုးရကျောင်းနှင့် ပေါင်းစပ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ရှိ
(7)Policeman killed, scores injured in Myanmar land clash
(6)မြစ်နားရွာ ဆရာတော်ကြီး ဈာပန ကျင်းပမည့် နေ့ရက်အပြောင်းအလဲဖြစ်
(5)Myanmar tourism industry ‘cannot do it alone’
(4)ပြောင်းလဲနေတဲ့ နိုင်ငံရေးတွင် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာတွေ သိဖို့လိုအပ်
(3)No Turning Back on Reforms, but StillaLong Way to Go: Burma Experts
(2)ကျောက်ပုဇွန်လုပ်ငန်းမှာ ပြည်ပဈေးကွက်အဖြစ် သီးသန့်ရပ်တည်နိုင်၊ ဒေါ်လာပုစွန်ဟု ခေါ်နိုင်ကြောင်းပြော
( 1 )Myanmar's Rohingya boatpeople stranded in Indonesia's Aceh
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင် ထောင်ထဲတွင် ထောင်အာဏာပိုင်များမှ လူမျိုးရေးအရ ခွဲခြား ဆက်ဆံမူများ ရှိနေကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် လူ့အခွင့်အရေး ကွန်ယက်က ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းဦးစီးဌာန ဘူးသီးတောင် အကျဉ်းထောင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဦးမင်းလွင်ဦး (ထောင်မှူး) ကြီးကြပ်ရေးမှူး ဆိုသူသည် ဘူးသီးတောင် အကျဉ်းထောင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် လျှက်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသား ရခိုင်လူမျိုး ဝန်ထမ်းများအာ အမျိုးသားရေး အရ ခွဲခြား ဆက်ဆံမူများ ရှိနေသည်ဟု ပြောသည်။
ဦးမင်းလွှင်ဦးသည် ဗမာလူမျိူး တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်ဝန်းထမ်းများအား “ မင်းတို့ ရခိုင်တွေ ဗမာလူမျိူးရဲ့ ဖဝါးအောက်မှာဘဲ ရှိတယ်။ အခု ကုလားသတ်လို့ အားလုံးသေကြတော့မယ်” ဟု ဆိုကာ လူမျိုးရေး အရ စော်ကားသည့် စကားများ ပြောဆိုင်ပြီး ရိုင်းစိုင်းစွာ ဆက်ဆံနေကြောင်း များမကြာမှီက လွှတ်မြောက်လာသူ အကျဉ်းသား တစ်ဦးကို ကိုးကားပြီး အဆိုပါ အဖွဲ့က ပြောသည်။
အကျဉ်းသားများကိုလည်း လူ့အခွင့်အရေး ချိူဖေါက်မှုများပြုလုပ်နေကြောင်း၊ သောက်ရေ မလုံလောက်သဖြင့် ထောင်သားများကို လက်ဆေးရေများကို အတင်းအဓမ္မ တိုက်ကျွေးမူများလည်း ရှိကြောင်း ဆိုသည်။
ထောင်ထဲရှိ အဆောင်(၄)မှ အကျဉ်းသား မောင်ထွန်းနိုင်၊ ထွန်းအေးလှိုင်၊ နေလင်းထိုက်၊ မာမက်အာလောင် တို့ကို လက်ဆေးရည်များကို အတင်း တိုက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ကပ္ပလီ ခေါ် ဆွေယက်တာလီ ကိုလည်း လက်ကျိူးအောင် ရိုက်နှက်ခဲ့သဖြင့် ဘူးသီးတောင်ဆေးရုံတွင် အတွင်း လူနာ အဖြစ်ကုသခဲ့ရသလို အာယု ဆိုသူကိုလည်း အမျိူးသမီးဝတ် လက်ပတ်နာရီ တစ် လုံး ဝယ်ခိုင်း သော်လည်း ဝယ်မပေးသဖြင့် ရိုက်နှက်ခဲ့သည်ဟု ပြောသည်။
လူ့အခွင့်အရေး ချိူးဖေါက်နေသော ဝန်ထမ်းအရာရှိ ဦးမင်းလွင်ဦးဆိုသူကို သက်ဆိုင်ရာမှ စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်ပြီး ထိရောက်စွာ အရေး ယူပေးပါရန် မီဒီယာမှတဆင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးကို တိုက်တွန်းကြောင်း ရခိုင် လူ့အခွင့် အရေး ကွန်ယက်က ပြောဆိုသည်။
မွန်နဲ့ တနင်္သာရီမှ အရာရှိကြီးများ ရခိုင်ကလေး တစ်ဦး အရေး သနားဂရုဏာထား၍ ဖြေရှင်းပေးစေလို (ပေးစာ)
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့နယ်မှ ရွှေ့ပြောင်းလာပြီး တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လောင်းလုံးမြို့နယ် ပြင်ကြီးကျေးရွာ ရော်ဘာခြံ (ဦးရွှေရိုးခြံအနီး)တွင် ခြံစောင့် အလုပ်သမား များဖြစ်ကြသော ဦးနီထွန်းဦးနှင့် ဒေါ် အေးသန်းနုတို့၏ တစ်ဦးတည်းသော သားဖြစ်သူ မွေးသက္ကရာဇ် ၁၃၅၈-ခု နှစ်ဖွားအသက် ၁၆နှစ်ရှိ မောင်နိုင်ဇော်သန်း(ခ) မောင်မောင်ဦးကို ခြံပိုင်ရှင်ဖြစ်သော မွန်ပြည် နယ် ချောင်းဆုံမြို့နယ် ဘီလူးကျွန်း ဘိုနက် ကျေး ရွာနေ ဦးကျော်မင်းထွန်း(အဖ-ဦးထွန်းရွှေ)သည် ၁၃၇၃-ခု၊ တန်ခူးလဆန်း(၁၀)ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့တွင် လိမ်လည်လှည့်ဖြား ခေါ် ဆောင်သွားကာ ထိုင်းနိုင် ငံတစ်နေရာတွင် ရောင်းစား ထားသည်ဟု သိရပါသည်။
မိဘနှစ်ပါးသည် သားဖြစ်သူနှင့် (၁၁)လကြာ အဆက်အသွယ် ပြတ်နေပါသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် အမြန်ဆုံးဆောင် ရွက် ပေးနိုင်ပါရန် အသနားခံ တင်ပြအပ်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့(ICRC) မှ အဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးသည် မော်တော်ယာဉ် ၃ စီးဖြင့် လိုင်ဇာမြို့သို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် ရောက် ရှိခဲ့ပြီး လိုင်ဇာဆေးရုံနှင့် ဒုက္ခသည် စခန်းများသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုပြီး အခြေအနေများကို မေးမြန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပထမအကြိမ်က ဗန်းမော် – မြစ်ကြီးနား လမ်းအတိုင်း လိုင်ဇာသို့ လာရောက်ရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း လမ်းမပွင့်သေးသောကြောင့် ဒုတိယအ ကြိမ်တွင် ဗန်းမော်- လွယ်ဂျယ်- မိုင်ဂျာယန် လမ်းမှ လိုင်ဇာသို့ ရောက် ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“လိုင်ဇာ ပြည်သူ့ဆေးရုံကို ဆေးပစ္စည်းတွေ လှူဖို့နဲ့ ဒီက အခြေအနေကို အကဲခတ်ဖို့က ဒီခရီးစဉ်ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ပါပဲ။ နောက်ထပ် အဓိကလို့ ပြောနိုင်တာကတော့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေ ပေးနိုင်ဖို့လို့ ပြောရင်လည်း ရပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ်စား လှယ် ဒုတိယခေါင်းဆောင် Bart Vermeiren က ပြောသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော အစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) တို့အကြား တိုက်ပွဲများ ကြောင့် ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများ ပျက်စီးခဲ့ပြီး ကချင်ပြည်သူ သောင်းချီ၍ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များအဖြစ် ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် နေထိုင်နေကြရဆဲ ဖြစ်သည်။
ကုလကူညီရေးအဖွဲ့များ ဖားကန့်ရှိဒုက္ခသည်များကို ဆက်လက်၍ လာရောက်ကူညီ ပေးလိုကြောင်း ပြောဆို
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့ရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို ၁ လစာအတွက် အကူညီပေးရန်ရောက်ရှိလာသော ကုလသမဂ္ဂ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့သည် အခက်အခဲရင်ဆိုင်နေရသော ဒုက္ခသည်စခန်း အသီးသီးသို့ကြည့်ရှုကာ ဆက်လက်၍ အကူအညီပေးချင် ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ကူညီရေးအဖွဲ့ UN မှ နိုင်ငံခြားသား Ashley Clements ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဝင် ၂၀ ဦးတို့သည် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဖားကန့်သို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီး စခန်းအသီးသီးသို့ကူညီ မှုပေးခဲ့ရာ ဒုက္ခသည်များ၏ အခက်အခဲပြသနာများကိုမြင်တွေ့ပြီး ၀မ်းနည်း ကြောင်းနှင့် ဆက်လက်၍လည်း ကူညီထောက်ပံ့မှုများပေးသွားရန် စီစဉ်သွားမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ၄င်းအဖွဲ့အား စခန်းများသို့ ဦးဆောင် ပေးနေသူ ဖားကန့် ဥရုဆိုင်းမှော်ဇုံနယ်မှ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး သိက္ခတော်ရဆရာ တိုင်လွမ့် တူးရော် ကပြောသည်။
“သူတို့က ဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်နေတာကို ကူညီရတာဝမ်းသာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁ လစာအတွက်ပဲ ကူညီပေးရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဘူး။ နောက် ရော ဆက်ပြီးကူညီသွားဖို့ စီစဉ်သွားမယ် လို့ပြောသွားတယ်။” ဟုသိက္ခတော်ရ တိုင်လွမ့်တူးရော် (Tailum Tu Raw) က KNG ကချင် သ တင်းဌာန သို့ပြောသည်။
UN အဖွဲ့သည် နိုင်ငံခြားအမျိုးသား ၂ ဦး အမျိုးသမီး ၁ ဦးအပါအ၀င် စားနပ်ရိက္ခာပစ္စည်းများ တင်ဆောင်လာသော ကား ၆ စီးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ စီး သောကား ၅ စီး အားလုံးပေါင်း ၁၁ စီးဖြင့်ရောက်ရှိခြင်း ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
ဖားကန့်မြို့နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းအသီးသီးတွင် ကြည့်ရှုကာကူညီပေးသွားခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် မှော်ဝမ်း စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ထောက်ပံ့ ပစ္စည်းများဝေပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိက္ခတော်ရ ဆရာတိုင်လွမ့် တူး ရော် (Tailum Tu Raw) ပြောသည်။
“မနေ့ကတော့ လောင်ခန် (လုံးခင်း)မှာကူညီပေးတယ်။ ဒီနေ့တော့ ဖားကန့်မှာ ဖားကန့်မြို့တွင်းမှာတော့ပြီးပြီ။ အခုတော့ မှော်ဝမ်းမှာ ပြန်ပေး နေတယ်။ မိသားစုလိုက် လူဦး ရေကိုကြည့်ပြီး ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲတွေပေးတယ်။ မိန်းကလေး တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုံးဆောင်ရမယ့်ပစ္စည်း တွေကအစပေးတယ်။ အသက် ၆၀ အထက်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တို့ ကလေး ၂ နှစ်အောက်က လေး၊ ၆ လအောက်ကလေး အဲလိုမျိုးတွေ ကို သူတို့အတွက် သူတို့နဲ့အလိုက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေပေးတယ်။ သူတို့က လူဦးရေ ၇၀၀၀ အတွက် ဆိုပြီးယူလာတာလို့ပြောတယ်” ဟု KNG ကချင် သတင်းဌာန သို့ ပြောသည်။
၎င်းတို့သည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ကတည်းက မြစ်ကြီးနားမှ ဖားကန့်မြို့သို့ သွားရောက်ရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ အာ ဏာပိုင်များမှ ဆိုင်းငံ့ထားသောကြောင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့မှ ၀င်ခွင့်ရခြင်းဖြစ်သည်။
အစိုးရမှ ထိုသို့ ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းသည် နိုင်ငံခြားသား ၃ ဦးပါဝင်သောကြောင့် ထိုသွားလမ်းတွင်ရှိသော အစိုးရ ဂိတ်များကို ၎င်းတို့အား မြင်တွေ့ခွင့်မပြုလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး သိက္ခာတော်ရ Rev. Dr. Hkalam Sam Sun ပြောသည်။
“နိုင်ငံခြားသာ ၃ ယောက်ပါလို့ သူတို့ကို မသွားခိုင်းစေချင်လို့လေ။ ဂိတ်တွေကို မတွေ့ခိုင်းချင်လို့ပေါ့။ အခုတောင် ဂိတ်တွေကိုအကုန်လုံးရုတ် လိုက်ပြီးမှ သွားခိုင်းတာ လေ။”
အစိုးရ၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့် အဆိုပါ ဂိတ်များကြောင့် အဟန့်တားရှိမရှိ အခြေအနေကို မေးမြန်းဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ၄င်း ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောဆိုခွင့်မရှိကြောင်း ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် ဒုက္ခသည်စခန်း ၃၂ ခုရှိပြီး ဒုက္ခသည် ၇၀၀၀ ကျော်ရှိသည်ဟု ဒုက္ခသည်များကို ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေသည့် အဖွဲ့အ၀င် သိက္ခတော်ရ တိုင်လွမ့်တူးရော် (Tailum Tu Raw) ကပြောသည်။